ယောက်ျားမိန်းမ မဟူတည်း – Grab Love Story
နွေ၏ အငွေ့အသက်တို့ စတင်လာပြီဖြစ်သော မတ်လ၏ နောက်ဆုံးရက်တစ်ရက်….။
လူကိုက်ဖူးသော ကျားသည် ပိုမို ရဲတင်းသည့်ပမာ အတွေ့အကြုံ စုံသော ယောက်ျားတို့၏ ရမ်းကားမှုသည် မိန်းမတိုင်း အတွက် အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတို့အပေါ် အထင်ကြီးတတ်လွန်းသည့် မိန်းမသားများ အဖို့ အလွန်ပင် အန္တရာယ် ကြီးမားလှပေသည်..။
“ အရက်တစ်လုံးနဲ့ အရွက်သုတ် တစ်ပွဲ ပေးပါဗျို့…”
မနီတစ်ယောက် အဝင်ပေါက်ဘက် ကို ကျောပေးလိုက်ရင်း ကိုယ်ကို တစောင်းလှဲလျက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ယောက်ျားတို့အကြောင်း စာအုပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖတ်နေစဉ် နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး အရက်သောက်မည့်သူက ရောက်ချလာသည်..။
ရေချိုး ၊ အဝတ်လျှော် ၊ ကလေးသိပ်ပြီး နေ့လည်နေ့ခင်း စာအုပ်ဖတ်နေခြင်း ဖြစ်သည်..။ ဒီစာအုပ်ကို သူ့ယောက်ျား ကိုခင်မောင်မြင့်က ဖတ်ဖို့ ပေးထားသည်မှာ ကြာပြီ ….။
“ ရော့…..နီနီ…ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်စမ်း…၊ လူဆိုတာ ဗဟုသုတ ရှိရတယ်..ကွ…၊ ဗဟုသုတ ရှိမှ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ၊ အကြောင်းနဲ့ အကျိုး ၊ အမှားနဲ့ အမှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တယ်..။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ယောက်ျားတွေရဲ့ အကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပက်ပက်စက်စက် ရေးပြထားတယ်..။ ဒီစာအုပ်မျိုး မိန်းမတွေ သိပ်ဖတ်သင့်တယ်…..ရော့….”
ယခု သူ့ယောက်ျား ကျောက်ကိစ္စနှင့် မူဆယ်ဘက် သို့ ထွက်သွားသည်မှာ တစ်ပတ်လောက် ရှိပြီ..။ ရက်ပေါင်း ၂၀ လောက် ကြာမည်ဟုလည်း ပြောသွားခဲ့သည်..။
လွန်ခဲ့သော တစ်လလောက်ကထဲက သူ့ယောက်ျားက ဖတ်ရန် ပေးထားခဲ့သည်..။ စာအုပ်က စာမျက်နှာ ၂၀၀ ကျော်လောက်ရှိသည်..။ မဖတ်ချင် ဖတ်ချင်နှင့် ဖတ်လာခဲ့ရာ အခုမှ စာမျက်နှာ တစ်ရာလောက် ရောက်ရုံသာ ရှိသေးသည်..။
မနီက ဒီလိုစာအုပ်မျိုး မကြိုက်…။ သူမ ဖတ်လေ့ ရှိတာက အချစ်ဝတ္ထုတို့ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကြော်ငြာများများ ပါသော မဂ္ဂဇင်းတို့လောက်သာ ဖတ်လေ့ရှိသည်..။ သူ့ယောက်ျားက ဒီစာအုပ်ကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဖတ်စေချင်မှန်း မနီ သိပါသည်..။ သူ့ယောက်ျား ကိုခင်မောင်မြင့်က သူ့ထက် ၁၅ နှစ်ကြီးသည်..။ ထို့ကြောင့် မိန်းမကို စိတ်မချသည့်အတွက် ယောက်ျားတွေရဲ့ ကာမဂုဏ်ထောင်ချောက်အတွင်း မသက်ဆင်းမိစေရန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တတ်အောင် ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်..။
ထို့အပြင် ကာမဂုဏ် ဖောက်ပြန်သော ဇာတ်တော်တွေကိုလည်း ပြောပြသည်..။ ကာမဂုဏ် ဖောက်ပြန်သော ယောက်ျား မိန်းမတွေ သေလျင် ကျရောက်တတ်သော ငရဲဘုံ ၊ ပြိတ္တာဘုံ တွေကိုလည်း ပြောပြသည်..။
ဒုသနသော ပုံဝတ္ထုတွေကိုလည်း နားငြီးအောင် နားထောင်ရသည်..။ လူက ဘာသာရေးသမားလိုလို ဘာလိုလို..။ အလုပ်က အရက်ရောင်းသည့် အလုပ် ။ နေ့တိုင်း သောက်၏ ..။ သို့သော် ဆိုင်သိမ်းပြီးမှ ခွက်ပုံးချသည်..။ အရက်ဆိုတာ မသောက်တတ်လျင် ဘေး ၊ သောက်တတ်လျင် ဆေးဖြစ်ကြောင်း ..ဘယ်ပုံဘယ်နည်း သောက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကမ္ဘာကျော် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ၊ စာရေးဆရာကြီးတွေတောင် သောက်လေ့ ရှိကြောင်း ..။ စသည်ဖြင့် အရက်ရောင်းစားသူပီပီ အရက်မကောင်းကြောင်းတော့ ပြောလေ့ မရှိ…။
အရက်ဆိုင်ဆိုတာက သိကြသည့်အတိုင်း လူစုံ သည်..။ စကားစုံသည်..။ စရိုက် စုံသည်..။ တစ်ချို့က အေးအေးဆေးဆေး မသောက် ၊ သွေးဆိုးသည်..။ ပြဿနာ ရှာတတ်သည်..။ အရစ်တက်သည်..။
အခုနောက်ပိုင်း လိုက်စင်လုပ်ထားပြီး ဖြစ်၍ တော်သေးသည်..။ ပြဿနာ ရှာလျင် ရပ်ကွက်လူကြီး တိုင်ရုံသာ…။
မနီ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို အမှတ်အသား ပြု ပိတ်လိုက်ပြီး ခုံရှည်ပေါ် တစောင်းလှဲနေရာမှ ထလိုက်သည်..။ အရက်မှာသည့်သူက အဝင်ပေါက် ညာဘက်ဘေးခုံမှာ အမိန့်သား ထိုင်ရင်း အားကစား ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ဖတ်နေသည်..။
လူပုံစံက အသက် ၁၈ နှစ်ခန့် အရွယ် ၊ လူရည်သန့်ကလေး ဖြစ်သည်..။ ကျားကျားလျားလျား ၊ တောင့်တောင့်တင်းတင်း သွက်သွက်လက်လက် ဖြစ်မည့် ပုံစံ…။ ဆံပင်က …ကတုံးဆံပင်ပေါက်ကေ…။
မနီက မြင်းခွာရွက်သုတ် တစ်ပွဲနှင့် အရက်တစ်လုံး သွားချပေးလိုက်သည်..။ အရက်ပုလင်းနှင် အမြည်း ရောက်လာသောအခါ ဖတ်လက်စ ဂျာနယ်ကို ချ၍ မနီကို မော့ကြည့်ပြီး….
“ မမ….ဒီနားမှာ ကွမ်းယာဆိုင် ရှိလား ဟင်……”
“ အေး….ရှိတယ်…ဘယ်လောက်ဖိုး ဝယ်မှာလဲ…မမ သွားဝယ်ပေးမယ်လေ….”
ကျော်ထူးက ၂၀၀ တန် တစ်ရွက် ထုတ်ပေးရင်း …
“ ၂၀၀ ဖိုး ဝယ်ခဲ့ပေး…မမ…”
မနီက ကျော်ထူးမျက်နှာကို အသေအချာ ကြည့်၍ ….
“ မင်း….က ကိုသန့်စင် နဲ့ အမျိုးလား….ဘာတော်လဲ…”
“ အော်….ဟုတ်..၊ သူ့ညီ အငယ်ဆုံးလေ…၊ မနေ့ညကမှ ရောက်တာ…၊ အစ်ကိုကြီးတို့ အလုပ်သွားကြတယ်…ကျနော်လဲ ပြင်း ပြင်း ရှိတာနဲ့ ဒီဖက် ထွက်လာတာ…၊ ဆိုင်က လူပါးတယ်နော်….မမ.”
“ အေး…ဒီအချိန်လောက်ဆို …မရှိသလောက် ပါပဲ…၊ ညနေပိုင်း အလုပ်ပြန်ချိန်မှ ပေါတာလေ….”
“ ဟာ…မမ…၊ ကျနော် ဒီလာတာ…အစ်ကိုကြီးကို သွားမပြောနဲ့နော်……..”
မနီက ကြာကြည့် ကြည့်ရင်း တဟင်းဟင်း ရယ်ကာ ကွမ်းယာဝယ် ထွက်သွားပါတော့သည်..။ မာယာလေးဆယ်တွင် တစ်ပါး အပါအဝင် ဖြစ်သော ရယ်ခြင်းမျိုးမို့ …စပို့ရှပ် အင်္ကျီပါးပါး အတွင်းက အတွင်းခံဘော်လီမဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ တသိမ့်သိမ့် တငြိမ့်ငြိမ့် လှုပ်ခါသွားသည်..။
ယောက်ျား ခရီးထွက်သွားသည်မှာ တစ်ပတ်ကျော်လာပြီဖြစ်၍ သူမ၏ သွေးသားရမ္မက်ဆန္ဒတို့မှာ မွတ်သိပ်တောင့်တနေလျက် ရှိနေပါသည်…။ ယခင်က ခရီးထွက်လျင် ၂ ညအိပ် ၊ ၃ ညအိပ်လောက်သာကြာတတ်သည်…။ အခု ရက်ပေါင်း ၂၀ ခန့် ကြာမည် ၊ ငွေလည်း သိန်းချီ ရမည်ဟု ပြောသည်..။
ဘာအလုပ်လည်း ဆိုတာတော့ လုံးဝမပြော…။ မနီကလည်း စပ်စပ်စုစု မမေး..။ အဓိက ငွေရဖို့သာ..ပဓာနလေ…။ ဒီနေ့မှာမှ မနီ၏ ရမ္မက်ဆန္ဒတွေက သိသိသာသာကြီး ထကြွနေသည်..။
မနက်ပိုင်းက ဈေးသည်မ ကြိုင်ကြိုင် ရောက်လာတော့ ပိုဆိုးသွားသည်..။ ကြည်ကြည့်ထံက ဟင်းချက်စရာ ဝယ်ရင်း နှစ်ယောက်သား လေမိနေကြသည်..။ ပြီးတော့ အသက်ကလည်း မတိမ်းမယိမ်း အရွယ်တွေ..။
ကြည်ကြည်ဆိုတဲ့ ဈေးသည်မက လီးအကြောင်း စောက်ဖုတ်အကြောင်း တွေကို မရှက်မကြောက် ပက်ပက်စက်စက် ပြောတတ်သည်..။ ဈေးဘန်းကို ချပေးလိုက်ပြီးနောက် …ဟိုဟိုဒီဒီ ဝေ့ကြည့်ကာ….
“ ဟဲ့….ညည်း ယောက်ျားကြီးရော..မမြင်ပါလား…..”
“ ညည်းယောက်ျားကြီးရော ဆိုတော့ ၊ ငါ့မှာ ယောက်ျားလေး ရှိနေတာကျနေတာပဲ….”
မနီက ပြုံးစစမျက်နှာလေးဖြင့် မျက်စောင်းထိုးကာ ပြောသည်..။
“ အမလေးဟဲ့..အထအန ကောက်နေလိုက်တာ…ဖာသယ်မရယ်…၊ နင့်ထက် အသက်ကြီးလို့ နင်ယောက်ျားကြီးလို့ ပြောတာပေါ့…ကဲ……..”
ကြည်ကြည့် ရှုံ့ကာမဲ့ကာ ပြောသည်..။ အမှန်အားဖြင့် မနီကလည်း တကယ်မကျေနပ်၍ ပြောခြင်းမဟုတ်..။ ပါးစပ်ကသာ ဟန်လုပ်ပြနေသော်လည်း စိတ်ထဲကမူ သာယာကျေနပ်နေတာ..၊ အထူးသဖြင့် လီးနှင့် ပြတ်လတ်နေသော အခုလို အချိန်မျိုးဝယ် အညှီအဟောက် စကားမျိုး..၊ ပက်စက်စွာ တစ်တစ်ခွခွ ပြောတာမျိုးတွေကို ပိုပြီး ကြားချင်လှသည်..။
“ မူဆယ်ဖက် ခရီးထွက်သွားတာ တစ်ပတ်လောက်တောင် ရှိပြီ…ကြည်ကြည်ရေ…၊ အရက် ၂၀ လောက် ကြာမယ် ပြောတာပဲ….”
“ ကဲ….ဒီလိုဆို ..ညည်းစောက်ဖုတ်က လီးငတ်နေမှာပေါ့….အဟင်း..ဟင်း……”
“ ဘာစုတ်ပဲ့ရမှာလဲ..ဟဲ့…သေနာမရဲ့…၊ မှန်တာပြောတဲ့ ဥစ္စာ…၊ ဒို့ကတော့ ယောက်ျား ခရီးရှည်ထွက်ရင် စောက်ဖုတ်ကို လီးအပြတ် မခံဘူးတော် ရေ…၊ သိလား…ကြုံသလိုဖန်ပြီး စားပစ်လိုက်တာပဲ….၊ အ ဟင်းဟင်း………”
“ အံမယ်….ဖေလိုးမ….နင်က ခံဖူးတယ် ပေါ့……..”
မနီက မကြည်ကြည်စကားကို သဘောကျ၍ ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး လုပ်နေသည်..။ သူမ မျက်ဝန်းတွေက ရမ္မက်ဆန္ဒ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် စိုလက်တောက်ပလာသည်..။ စောက်ဖုတ်ထဲမှာလည်း ယားသလိုလို ရွသလိုလို ကြွသလိုလို ဖြစ်လာသည်..။
မနီရဲ့ ဖြီးတီးတီး ပုံစံကြီးကို ကြည့်ပြီး….၊ ကြည်ကြည်က……..
“ တကယ်ပြောတာဟဲ့…ကောင်မရဲ့……ဖြီးတီးတီး လုပ်မနေနဲ့………”
ကြည်ကြည်က မနီမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း ပြောသည်..။ တစ်ဖက်က မေးများ မေးမလားဟု စောင့်စားနေရာ ဘာမှ မမေးသဖြင့် ဆက်ပြောပါတော့သည်…။
“ တစ်ခါများအေ….အိမ်ကလူကြီး…မုံရွာဖက် ခရီးထွက်သွားတာ…၅ ရက်လောက် ကြာတယ်…၊ နှစ်ရက်လောက် ရှိတော့ ငါ့စောက်ဖုတ်က တအားကို ဆာလာပါရော…”
ကြည်ကြည့် ခေတ္တ စကားပြတ်သွားခိုက်…၊ မနီက ဈေးဘန်းထဲက ခရမ်းသီး တုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးကို ကောက်ကိုင်ကာ…..
“ ဒါကြီးနဲ့ ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့………”
“ အမလေး…ဝေးလို့ …ဝေးလို့..၊ ခရမ်းသီး ဘာလုပ်မှာလဲ…ဟဲ့..။ တကယ့်လီးအစစ်ကို ခံပစ်တာဟေ့….သိလား….၊
“ အိမ်မှာ အမြဲတမ်း ရေလာလာ ပို့နေတဲ့ ကျော်ထွန်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေး ရှိတယ်..။ အသက်က ၁၈ နှစ်လောက်ပေါ့အေ….။ ငါဈေးရောင်းပြီး ပြန်လာရင် ရေဆယ်ထမ်း လာပို့နေကျ…။ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံယူပြန်ပေါ့…၊ အဲဒီနေ့ကတော့… ငါ့ဆီက ပိုက်ဆံ မရသေးလို့ စောင့်နေတာ…၊ ငါက တော်တော်နဲ့ ထွက်မလာတော့ ကောင်လေးက အခန်းထဲ ဝင်ချလာပါရော…။ ငါကလဲ…ဒါကိုသိလို့ ထမီကို ပေါင်လည်လောက်ထိ လှန် နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဖော်ပြီး အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်တာ…၊ ဒီမယ်လေ….ငါ့နို့က ကြီးကြီး ရယ်…ကောင်မ..ရဲ့..”
ကြည်ကြည်က သူမ ရင်ဘတ်ကို ကော့၍ ဘယ်ယိမ်း ညာယိမ်း လှုပ်ပြသည်..။ မနီက သဘောတွေကျလျက် တခစ်ခစ် ရယ်ပါတော့သည်..။
“ မရယ်နဲ့….ကောင်မရဲ့…ဒို့ နို့ကမှ စပါယ်ရှယ်…ပင်ကိုယ်နို့…။ ဟို …မော်ဒယ်ကနေ တက်သွားတဲ့ မင်းသမီးအေ….ဘယ်သူ….လဲ…ထားပါတော့…ပျော့တိပျော့ဖတ် ..နို့ပျင်းကျကြီးနဲ့….ဒါမို့ ဆေးထိုးပြီး ယောက်ျားတွေ မက်အောင် တင်းအောင် လုပ်ထားရတာ…။ ဒို့က ဘာဆေးမှ မလိုဘူး…ပင်ကိုယ်တင်း…ပင်ကိုယ်ထွား..။ ဒါကြီး မြင်တော့ သေနာလေး…ဘယ်လီးမတောင်ပဲ နေပါ့မလဲ….။ ပြီးတော့ ဟောဒီ ပေါင်တန်ကြီးတွေကလဲ ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်…”
မကြည်ကြည်က သူမ ပေါင်နှစ်လုံးကို လက်နှင့် ပုတ်ပြသည်..။ ပြီးတော့မှ စကားကို ..ပြန်ဆက်သည်..။
“ ငါက…မျက်လုံးကို မှေးစင်းပြီး ကြည့်နေတာ….သေနာလေးက မသိဘူးလေ….။ မွှန်နေတာကိုး…။ အပေါက်ဝကနေ ရပ်ကြည့်နေတာ…အေ့..“
“ ခဏနေတော့…ငါက ညာဖက်ပေါင်ကို ထောက်လိုက်တယ်…။ ညာဖက်လက်နဲ့လဲ…ထမီကို မသိမသာ ဆွဲလိုက်သေးတယ်…။ ဒီတော့…စောစောထဲက ပေါင်လည်လောက်ရောက်နေတဲ့ ထမီက ပေါင်ရင်းထိ ကပ်သွားတော့တာပေါ့…။ ဒီတော့ …ပေါင်တံဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီး ကြားက စောက်မွှေးအုံ မဲမဲအုပ်အုပ်ကြီးကို မြင်သွားတာပေါ့…အေ…..။ အပေါ်ပိုင်းက တင်းရင်းဝင်းအိနေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံး ၊ အောက်ပိုင်းက ဖြူဖွေးတုတ်ခိုင်လှတဲ့ ပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းနဲ့ စောက်မွှေးအုံ မဲမဲ ဆိုတော့…သကောင့်သားလေး ဘယ်နေနိုင်တော့မလဲ….။ အခန်းတံခါး မြန်မြန်ပိတ်…၊ ပုဆိုးကို ချွတ်ထည့်ပြီး…ခုတင်ပေါ် အတင်းတက်ပြီး လိုးပါရော..အေ…..။ လူသာငယ်တာ…သတ္တဝါလေးက မခေဘူး…တော်ရေ့..။ လီကလဲ ကြီး အလိုးကလဲ ကျွမ်း…အဆောင့်ကလဲ သန်လိုက်တာအေ….၊ ထန်လှပါတယ် ဆိုတဲ့ ငါတောင် မျော့ကျသွားတာပဲ…။ အဟင်းဟင်း…..လူပျိုသိုး ဆိုတဲ့အတိုင်း လိုးလိုက်တာများ…ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကို ကျေသွားတာပဲ…။ နောက်ဆုံး ငါ့ကို ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ထားပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်း အောက်ချပြီး လိုးတဲ့ အချီများ…ထိမှ ထိအေ….၊ နို့နှစ်လုံး ကို အခြေက ဆုတ်လိုက်ပြီး မတ်တတ်ရပ် သိပ်လိုက်တာများ….အခုပြောရင်း ဆိုရင်းတောင်..စောက်ဖုတ်ထဲ ရွလာပြီ….အဟီး…ဟိ…၊ အဲဒီဟာ ပြီးတော့….ကောင်မရယ်…ငါဆို…လမ်းလျှောက်ရတာကို…ပေါင်တွေကွတကွတကြီးဖြစ်လို့…..ဟယ်….။ အတော်ကို လိုးနိုင်တဲ့ ဟာလေး…အေ….”
ကြည်ကြည်တစ်ယောက် အယုတ်တမာ စကားတွေကို အမြှုပ်ထွက်မတတ် ပြောရင်း…မျက်လုံးပြူး မျက်ဆန်ပြူးဖြင့်…
“ အလိုလေး…ဒုက္ခပါပဲ…ဒီမယ်…မြင့်ကြည်က ဟင်းထုတ် နှစ်ထုတ် မှာထားတာ…အဆဲခံရတော့မှာပဲ….၊ ကောင်မ…ငါ့ဈေးဗန်း ပြန်ပင့်ပေးစမ်း…၊ ညည်းအတွက် နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်နေရတာနဲ့ ငါ အဆဲခံရတော့မယ်…..”
မနီက ဈေးဗန်းကို ပြန်မပေးရင်း..
“ နင်က ရွပြီး ပြောနေတာကို..အဆဲခံလိုက်ပေါ့….အေ…အဟင်း..ဟင်း………”
ဈေးဗန်း ခေါင်းပေါ် ရွက်ရင်း မကြည်ကြည် ထွက်သွားသည်..။ ဟုတ်လောက်ပါသည်..။ သူခန္ဓာကိုယ်က ယောက်ျားတွေ တပ်မက်ချင်စရာ …ဆူဖြိုး ပြည့်တင်းဆဲ…။ ထမီ ခလယ်လောက်တွင် သိသာထင်ရှားသော အစိုကွက်ကြီး တစ်ကွက်…ထင်းလျက်ရှိသည်..။
မနီတစ်ယောက် မကြည်ကြည်ကို အားကျမိသည်..။ ရေချိုးရင်း သူမ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆပ်ပြာဖြင့် အထပ်ထပ် အခါခါ ပွတ်တိုက်မိသည်..။ အညစ်အကြေး ကင်းစင်ပါလျက်နှင့် ထိုသို့ အထပ်ထပ် ပွတ်တိုက်နေခြင်းမှာ ကာမစိတ်တွေ ထကြွနေ၍ ဖြစ်သည်..။ ရေချိုးသော နေရာက လုံလုံခြုံခြုံ ကာရံထားသောကြောင့် ထင်တိုင်း ကျဲနေခြင်း ဖြစ်သည်..။
သူ့နို့အုံကြီးနှစ်လုံးက မကြည်ကြည် နို့အုံထက် လှသည်..။ တင်းသည်…။ ဝင်းသည်..။ ကြီးထွားမို့မောက်သည်..။ အို..ကုန်ကုန်ပြောရလျင် သူ့တစ်ကိုယ်လုံး မျက်နှာပါမကျန် မကြည်ကြည်ထက် အဆတစ်ရာ သာသည်..။
“ မမ…နှပ်ဆေးက အရေလား..အဖတ်လား……..”
ကွမ်းယာရောင်းသည့် ကောင်မလေးက မေးတော့မှ မနီတစ်ယောက် အိပ်မက်က လန့်နိုးသလို အတွေးတွေ လွင့်ပျောက်သွားသည်..။
သူ့ကိုယ်သူ မလုံမလဲ ဖြစ်ကာ…
“ အ ဟင်း..ဟင်း….အရေရော ..အဖတ်ရော ထည့်…ညီမ……”
ကျော်ထူးတစ်ယောက် အစ်ကိုဖြစ်သူ အလုပ်သွားခိုက် ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အိမ်ကထွက်လာခဲ့သည်..။ အစ်ကို့မိန်းမ မလှရီက ထမင်းချက်ရင်း ဘယ်သွားမှာလဲဟု မေးရာ…ဒီနားတင်ပါ.ဟု ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့သည်..။
မြို့စွန်ရပ်ကွက်ဖြစ်သည့်အတိုင်း တော်တော်လေး စည်ကားနေသည်..။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ၊ ကုန်စုံဆိုင် ၊ စာအုပ်အငှါးဆိုင် ၊ အခွေငှါးဆိုင် တော်တော်များများနှင့် စုံလင်လှသည်..။ အိမ်ခြေကတော့ စိပ်သည်..။ တစ်ချို့ ဝင်းကျယ်ကျယ် ၊ တစ်ချို့ကျ ဆယ်ပေ ဆယ့်ငါးပေ ပြွတ်သိပ်နေသည်..။
တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့် ၊ ခပ်ပျံပျံ ခပ်လန်လန် ကောင်မလေးတွေလည်း ပေါသည်..။ မျက်နှာစိမ်း ဖြစ်သည့် ကျော်ထူးကို တစ်ချို့က ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် လုပ်ကြသည်…။ ရပ်ကွက်လမ်းမအတိုင်း မြောက်ဘက်ဆီသို့ တစ်ဖြေးဖြေး လျှောက်လာခဲ့ရာ သူ့အစ်ကိုအိမ်နှင့် သုံးပြခန့် အကွာ လမ်း၏ ညာဖက်ဘေးတွင် ခပ်သန့်သန့် အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို မြင်သဖြင့် အတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခု ရရန် ဝင်လိုက်သည်..။
“ သုခဘုံ ..ယမကာ ရိပ်သာ ” တဲ့….။
ဆိုင်ထဲ ရောက်တော့ လူတစ်ယောက်မှ မရှိ..။ ဆိုင်အတွင်းရှိ ခုံရှည်ပေါ်တွင် အသက် ၂၈ နှစ်ခန့်ရှိ ခပ်တောင့်တောင့် မိန်းမတစ်ယောက် သူ့ကို ကျောပေးပြီး စာဖတ်နေသည်..။
တစောင်းအိပ် အနေအထားမို့ ဆူဖြိုး ထွားကားသော ဖင်ဆုံကြီးမှာ သိသိသာသာ ကောက်ထစ်ကာ မို့ဝက်တက်နေသည်..။ ဖင်ဆုံကြီးက ဝင့်ကြွားခန့်ထည်သလောက် ခါးလေးမှာ ညွှတ်ပြောင်း သွယ်လျနေသည်..။ သည့်ပြင် …ပြည့်တင်းသော ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းကြီးတွေကို မြင်ရရုံနှင့် လုံးကြီးပေါက်လှ အမျိုးအစားဟု အကဲခတ်လို့ရသည်..။
လူသူ ကင်းရှင်းနေသည့်အတွက် ပြန်ထွက်မည်ဟု ခြေလှမ်းအပြင် ထိုမိန်းမ၏ အဆင်းသွင်ပြင်က ညှို့ယူဖမ်းစားထားလိုက်သဖြင့် ကျော်ထူး ဝင်ထိုင်ရင်း အရက်မှာဖြစ်သွားသည်..။
ထိုမိန်းမက သူ့ကို ကြာကြည့် ကြည့်ရင်း ကိုသန့်စင် ညီလားဟု မေးလိုက်သည်..။ အခု ထိုမိန်းမသည် သူ့အတွက် ကွမ်းယာ သွားဝယ်နေသည်..။ ဖြူဝင်းစိုပြေသော ပါးပြင်ဝယ် သနပ်ခါး ပါးပါး ကွက်ကြား အဖွေးသားနှင့် သူ့ကို ကြာကြည့် ကြည့်သွားသည်..။ ပြီးတော့ သူမ မျက်လုံးတွေက စိုလက်ဝင်းပနေပြီး ကျော်ထူးရင်ကို နွေးထွေး လှုပ်ရှားစေသည်..။
နောက်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို မွတ်သိပ်တောင့်တနေကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားလွန်းလှသည်..။ ကျော်ထူးဆိုတဲ့ ကောင်ကလည်း တောက တက်လာသည့်တိုင် နလပိန်းတုံးတော့ မဟုတ်…။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသော တောသား ဖြစ်သည်..။
အပြာစာအုပ် အပြာကားတွေ ထောင်းလမောင်း ထအောင် ကြည့်ဖူးထားရုံမျှ မက သူ့ထက် ၅ နှစ်ခန့် ကြီးသော တစ်ခုလပ်မ တစ်ယောက်နှင့် ပင် ညိစွန်းဖူးထားသည်..။ မိန်းမဆော်နည်း နိဿရည်း ကို စာတွေ့ လက်တွေ့ နှံ့စပ်ထားပြီး ဖြစ်သည်..။
ယခု ..သူ့အစ်ကိုဆီ ရောက်လာတာကိုက ထိုတစ်ခုလပ် မိန်းမနှင့် အဆက်ပြတ်သွားစေရန် သူမိဘများက ပို့လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်..။ ကြာလျင် ရွာလူကြီးများနှင့် ထောင်ဖမ်းပြီး ပေးစားတော့မည့် အဆင့်သို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်..။
တစ်ခုလပ်မ မစန်းစန်းရီက လည်သည်..။ နပ်သည်..။ ပါးသည်…။ ဝင်္ကန္တ ဉာဏ်အရာတွင် ခေတ်သစ် စိဉ္စမာန ဟု ဆိုနိုင်လောက်သည်..။
ကျော်ထူးနှင့် တင်မကပဲ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်နှင့်ပါ ညိနေသည်..။ ထို့အပြင် ဘုရားဒကာ ကျောင်းဒကာ အရေခြုံပြီး ငွေတိုးပေးစားနေသည့် ဦးထွန်းအောင်ကြီးကိုပါ အဖုတ်နှင့် မြူ၍ ငွေခြူနေကြောင်း အနံ့ထွက်နေသည်..။
ကျော်ထူးကလည်း ထိုမိန်းမကို တော်တော်လေး စွဲလန်းနေသည်..။ သူ့မိဘများက အမျိုးမျိုး ဖျက်ကြသည်ကို လုံးဝ လက်မခံ..။ နောက်ဆုံး ယူဖို့အထိ ဆုံးဖြတ်ထားသည်..။
တစ်ခုလပ် စန်းစန်းရီနှင့် ပတ်သက်သမျှ တမင်သက်သက် အပုတ်ချ ပြောနေကြသည်ဟု ထင်မှတ်ထားသည်..။ တစ်ည စန်းစန်းရီနှင့် ချိန်းတွေ့ရင်း ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်ဖြစ်ကြသည်..။ စန်းစန်းရီက ကြာကြာလုပ်နိုင်အောင် ဟုဆိုကာ ကြက်ဥနှင့် အရက် စပ်ပေးထားသည်..။ ကြက်ဥနှင့် အရက်မပါလျင်လည်း ကျော်ထူးက ကြာကြာ ဆွဲနိုင်ပါသည်..။ ပြီးတော့ သူ့လီးတန်ကြီးက အရှည် ၈ လက်မ ၊ လုံးပတ်က ၇ လက်မခန့် ရှိရာ အရွယ်နှင့် မလိုက် စံချိန်လွန် လီးကြီး ပင် ဖြစ်သည်..။
ထိုညက ကျော်ထူး ၅ ချီတိတိ ဆော်ထည့်လိုက်သည်..။ စန်းစန်းရီလည်း အီဆိမ့်ပြီး မေ့မျောမတတ် ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်..။ ပြန်ကာနီးတွင် စန်းစန်းရီကို ပွေ့ဖက်ထားရင်း….
“ မောင်…နက်ဖြန်ခါ…မန္တလေး သွားရမှာ…အဖေ့အတွက် မျက်မှန် လုပ်ခိုင်းထားတာ တကယ်လို့ မရရင် တစ်ညအိပ်မှ ဖြစ်မှာ…“
“ နေ့ချင်းပြန်လာခဲ့ကွာ…မက မောင်နဲ့ မခွဲချင်ဘူး……”
“ အင်းပါ… မျက်မှန် ရရင်တော့ ပြန်လာမှာပါ…”
စန်းစန်းရီက ကျော်ထူး၏ လီးကြီးကို လက်ဖဝါးနှင့် ဆုပ်ချေပေးနေရာ တဖြေးဖြေး မာကျောတင်းတောင်လာပြန်သည်..။
“ ဟင့်အင်း…မောင်က မသေချာဘူး…နက်ဖန်ညအတွက်ပါ…အတိုးချလိုးပေးခဲ့…”
အရက်နှင့် ကြက်ဥ သတ္တိကြောင့်လားမသိ…၊ ၅ ချီတိတိ ဆော်ထားပြီးသည့်တိုင် လီးကြီးက ပြန်လည် တင်းမာ မတ်တောင်လာပြန်သည်..။
ကျော်ထူးကလည်း အဆင်မသင့်လျင် ညအိပ်ရမည်မို့ စန်းစန်းရီ အလိုကျ အတိုးချပြီး လိုးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်..။ ကျော်ထူး၏ လီးကြီးကို ဆွပေးရင်း စန်းစန်းရီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ မာန်ဖီ ဖောင်းထခုံးတက်လာသည်..။
ကျော်ထူးက စန်းစန်းရီ နို့အုံကြီးကို ဆုတ်ချေပေးရင်း ခုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲသိပ်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲ၍ မတ်တတ်ရပ်လျက် အသားကုန် ဆော်ပါတော့သည်..။ စန်းစန်းရီ တဏှာရာဂ ကြီးပုံကို အမှတ်ထင်ထင် သတိထားမိလိုက်သည်..။
နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ ပြီးသွားကြသည်..။ အပြန်တွင် စန်းစန်းရီ၏ တဏှာကြောတင်း ၊ ရမ္မက်ပြင်းပြလှပုံကို တွေးရင်း သူ့အဖေတို့က ဘာကြောင့် စန်းစန်းရီနှင့် မပတ်သက်စေချင်ကြောင်းကို သဘောပေါက်သလို ရှိလာသည်..။
စန်းစန်းရီ၏ ကာမရမ္မက် ပြင်းထန်ပုံက ကြောက်စရာတော့ ကောင်းလှသည်..။ သူကြားဖူးသည့် မဃဒေဝ လင်္ကာထဲကလိုများ ဖြစ်နေမလား မသိ..။
“ မိုက်အားသန်လှ ထိုမိန်းမတို့…
ပြုတတ်စွာ၏ ။ ရာဂ တပ်ပွေ့၊
ထိုဣတ္ထိတို့ ၊ တပ်မိမခွာ မျှော့ပမာသို့.. ”
နောက်တစ်နေ့ ကျော်ထူး မန္တလေးသို့ ထွက်လာခဲ့သည်..။ အလုပ်တိုက်တွင် သူ့အစ်ကိုနှင့် သွားတွေ့ပြီး သူ့အဖေမျက်မှန်ကို အားချင်း လုပ်ခိုင်းသည်..။ ကံအားလျှော်စွာ ညနေ ၅ နာရီတွင် မျက်မှန် ရသည်..။ သူ့အစ်ကိုက တစ်ညအိပ်ခိုင်းတာတောင် မအိပ်တော့ပဲ ပြန်ချလာသည်..။ ရွာရောက်တော့ ည ၈ နာရီခန့် ရှိပြီဖြစ်၍ အတော်လေး မိုးချုပ်နေပြီ..။
ထမင်းစား ရေမိုးချိုးပြီး စန်းစန်းရီ အိမ်ဖက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်..။ စန်းစန်းရီတစ်ယောက် မန္တလေး ညမအိပ်ပဲ ပြန်လာသည့်အတွက် အံ့သြ ဝမ်းသာ ဖြစ်သွားအောင် မှောင်ရိပ်ခိုကာ အသံမပေးပဲ တိတ်တိတ်ကလေး ဝင်လာခဲ့သည်..။
အိမ်တံခါးမှာ ပိတ်ထားသည်..။ မြေစိုက်အိမ်မို့ တံခါးနား အသာတိုးကပ်ပြီး ထရံပေါက်မှ အတွင်းသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်..။ ရေနံဆီ မီးရောင်တွင် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် ကျော်ထူး မျက်လုံးတွေ ပြာဝေမူးမိုက်သွားရသည်..။
ကိုသန်းအောင်နှင့် စန်းစန်းရီ တို့ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ကာ ခုတင်ပေါ်တွင် လိုးနေကြသည်..။ စန်းစန်းရီက လက်နှစ်ဖက် ရှေ့ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးထားသည်..။ ကိုသန်းအောင်က နောက်က မုဆိုးထိုင် ထိုင်ပြီး ခါးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ကာ ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေသည်..။
ကိုသန်းအောင်၏ ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ စန်းစန်းရီက ဖင်ဆုံကြီးကို နောက်သို့ ပစ်ပစ်ပြီး ခံသည်..။ စောက်ဖုတ်နှင့် လီးထိတွေ့သံ..ရမ္မက်ညီးသံတို့က မြေစိုက်အိမ်လေးထဲတွင် ပွက်ပွက်ညံလျက်ရှိသည်..။
ကျော်ထူးရင်ထဲ ပူလောင်လျက်ရှိသည်..။ ဒေါသစိတ်တို့ကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်..။ နှစ်ယောက်စလုံးကို သတ်ပစ်ချင်စိတ် ပေါက်လာသည်..။
“ အား…..အမလေး….အီးဟီး….ကောင်း….ကောင်းလိုက်တာ…မောင်ရယ်…..ဆောင့်…….ဆောင့်…ဟုတ်ပီ….ဆောင့်ပါ….အားရအောင် ဆောင့်စမ်းပါ…မောင်ရဲ့….အ…အီး….ကောင်းလိုက်တာ…….အား….အား…”
စန်းစန်းရီတစ်ယောက် ရှေ့သို့ မှောက်ကျသွားသည်..။ ကိုသန်းအောင်က ဆောင့်လို့ကောင်းတုန်း ခါးလေးကို အပီအပြင် ဆုတ်ကိုင်၍ အသားကုန် ဆောင့်ရင်း ဆောင့်ချက်တွေက ကြမ်းလွန်းလှသဖြင့် ခုတင်တစ်ခုလုံး လှုပ်ခါရမ်းနေသည်..။
ဆယ်ချက်လောက် ဆောင့်ပြီးသောအခါ ကိုသန်းအောင်လည်း စန်းစန်းရီ ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားတော့သည်..။ ကျော်ထူး ဒေါသစိတ်တွေ ပေါက်ကွဲသွားပြီး တောက်တစ်ချက် ပြင်းပြင်း ခေါက်ကာ တံခါးကို လက်သီးနှင့် တအားထိုးလိုက်သည်..။
သူ့စိတ်ကူးနှင့် သူ အူမြူး၍ ပြန်လာသော မနီတစ်ယောက် အပေါက်ဝ အရောက်တွင် ပြင်းထန်သော တောက်ခေါက်သံကြောင့် လက်ထဲက ကွမ်းယာထုပ် လွတ်ကျသွားသည်..။ နှုတ်ကလည်း ယောင်၍ အော်လိုက်မိသည်..။
သည်တော့မှ ကျော်ထူးလည်း သတိပြန်ဝင်လာကာ ပျာပျာသလဲ ဖြစ်သွားရသည်..။
မနီက အောက်ကျသွားသော ကွမ်းယာထုတ်ကို ကုန်းကောက်ရင်း သူ့ရင်ဘတ်ကို ဖိလျက် ….
“ အ..ဟင်း…ဟင်း….မမဖြင့် ရင်ထဲကို တုန်ခါသွားတာပဲ….မင်းက ဘာတွေများ ဒေါသဖြစ်နေရတာလဲ……”
“ အဟား….ဟား….ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး မမရာ…မနေ့က နှစ်လုံး သုံးထောင်ဘိုး မပြန်ဘဲ ထိုးမိတာ တွေးပြီး စိတ်တိုလာလို့….အဟဲ ဟဲ…ဆောရီးနော်…..”
“ အမလေး..ဟဲ့….တော်သေးတာပေါ့…မမ ကလဲ ဒီနေ့ ဘာထိုးရင် ကောင်းမလဲလို့ တွေးလာတာ….မင်းကလဲ….ထိုးရင် အာမှပေါ့…..ဟဲ့…“
မနီက ကျော်ထူးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံမှာ ဝင်ထိုင်ရင်း…….
ကျော်ထူးက ကွမ်းယာယူရင်း အတွင်းခံ ဝတ်မထားသဖြင့် တင်းတင်းရင်းရင်းကြီး ပုံပေါ်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အမှတ်ထင်ထင် စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်လိုက်မိသည်..။
မနီက မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး……
“ နေစမ်းပါအုံး …ဒီနေ့ ဘာကောင်းလဲဟင်….မမလဲ မင်းထိုးတာ လိုက်ထိုးမယ်…အခုတလော တည့်ကို မတည့်ဘူး…အပါချည့်ပဲ…..”
“ ကျနော်လဲ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ မနေ့က ဟာကြီး လှန်ထိုးရမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ…မမရ……”
“ ဒါဖြင့်….၅၃ ပေါ့….ဟုတ်လား…….”
“ မနေ့က ထွက်သွားတာက ၃၅ …သုံးဆိုတာက စ ဆ ဇ ဈ ည ..အင်္ဂါ ၊ ပ.ဖ.ဗ.ဘ.မ က ကြာသာပတေး…။ စ နဲ့ ဖ နဲ့ဆိုတော့ အင်း…….အဲဒါကို လှန်ထိုးမှာဆိုတော့ အဟီး…ဟီး….ကြောက်စရာကြီး ကွာ…….“
“ ဘာလဲ….မမရ…ဘာလို့ ရီတာလဲ…..”
“ မင်းဘဲ …စနဲ့ ဖကို လှန်ပြီး ထိုးမှာဆို….”
“ ဟုတ်တယ်လေ…မမက မကြိုက်ဘူးလား…ဒီတစ်ခါ လှန်ထိုးမှာဆိုတော့ အာစရာ မလိုဘူးလေ မမရ…သူ့ဖာသူ အာပြီးသား ဖြစ်နေပြီ..”
မနီက အထာနဲ့ပြောနေ၍ ကျော်ထူးကလည်း အထာပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်..။ မနီက ကျော်ထူးကို မျက်လုံးလေး ထောင့်ကပ်ကြည့်ရင်း ကြာမူအပြည့်ဖြင့် ….
ကျော်ထူးကလည်း ထောင့်ငါးရာ ဗို့အပြည့်ဖြင့် ပြန်ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည်..။
မနီက ညာလက်ကို စပို့ရှပ်အင်္ကျီထဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဘယ်ဖက် နို့အုံကြီး အောက်ခြေကို ကုတ်လိုက်သည်..။ သည်တော့ နို့အုံတင်းတင်းကြီးက စပို့ရှပ်အင်္ကျီကို ဖောက်ထွက်တော့မတတ် မို့မောက်စူထွက်လာသည်..။ ထိုအခြင်းအရာကို ကျော်ထူးတစ်ယောက် အရောင်တွေလက်လက်ထနေသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် အသေအချာ စိုက်ကြည့်နေသည်..။
မနီက အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့လိုလိုနှင့် စပို့ရှပ်ကို မ လှန်ပြီး ကြည့်မည့်ဟန်ပြုပြီးမှ နို့အုံဝင်းဝင်းအိအိကြီး တဝက်လောက်ပေါ်လာသောအခါ…
ရှက်ရမ်းရမ်းသောပုံစံဖြင့် ကပျာကယာ ပြန်ဖုံးလိုက်သည်..။ ဖြူဖွေးဝင်းအိနေသော နို့အုံတင်းတင်းကြီးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ ကျော်ထူး ရင်ထဲ ဒိန်းခနဲ လှုပ်ခါသွားရသည်..။
ထိုစဉ်…ထပ်ခိုးပေါ်မှ ကလေး ငိုသံ ကြားရသည်..။
“ ခဏနော်…မမ ကလေး နို့သွားတိုက်လိုက်အုံးမယ်…”
“ အော်…..ဒါနဲ့ ..မမယောက်ျား ရော ဟင်….”
ကျော်ထူးက သိချင်ဇောဖြင့် ခပ်လောလော မေးလိုက်သည်..။
“ မူဆယ်ဖက် တက်သွားတယ်…မောင်လေးရဲ့… တစ်ပတ်လောက် ရှိပြီ…အရက် ၂၀ လောက် ကြာမှာလေ…..”
မနီက ညှို့မျက်ဝန်းအစုံဖြင့် ကြာ ကြည့်လေး ကြည့်ရင်း ပြောသွားသည်..။ ကျော်ထူးတစ်ယောက် မနီ၏ ဆူဖြိုးပြည့်တင်းသော ခန္ဓာကိုယ် နောက်ပိုင်းကြီးကို ကြည့်ရင်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားစွာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်..။
စန်းစန်းရီနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ခဲ့ရသော စွဲလန်းစိတ် နာကျင်စိတ်များလည်း လွင့်ပျောက်ကုန်ပြီ…။ အရက်ရှိန်ကလေးလဲ ရလာပြီမို့ ပျော်မြူးတက်ကြွ လာတော့သည်..။ သူ့ ယောက်ျား မရှိဘူး ဆိုပါလား…။
ကြားဖူးထားသော မဃဒေဝ လင်္ကာစာပိုင်း အစလေးက သူ့ခေါင်းထဲ ရောက်လာသည်..။
“ မိစ္ဆာလိုကြူး ၊ လင်ကုန်ကူးသည်
ညစ်ညူးစာရီ ၊ အလဇ္ဇီဖြင့်
ဒုဿီဣတ္ထိ ၊ မျိုးဇာတိတို့
မိမိကိုယ်ကို ၊ စိတ်အလိုတိုင်း
ထိုထိုယောက်ျား ၊ တပ်ရာများနှင့်
လင်ယောက်ျား မရှိခိုက် လီးနှင့် ပြတ်လတ်လျက် ရှိသော မနီတစ်ယောက် မိစ္ဆာလိုကြူးပြီး လင်ကုန်ကူးတော့မည့် လက္ခဏာတွေ ပြသနေသည်..။
အရက်က တစ်ပိုင်းပင် မကုန်သေး..။ တစ်ခွက်ငှဲ့၍ တစ်ငုံသောက်လိုက်စဉ်…
“ မောင်လေး..ရေ…ဒီကို ခဏ….”
မနီက ထပ်ခိုးပေါ်မှ လှမ်းခေါ်သည်..။
ကျော်ထူးက လက်ကျန်အရက်ကို အကုန်မော့ချလိုက်ရင်း မနီရှိရာ အထပ်ခိုးပေါ်သို့ ခပ်သွက်သွက် တက်သွားလိုက်သည်..။ ကျော်ထူးတစ်ကိုယ်လုံး ကိလေသာ အမိုက်မှောင်တွေက တစ်စတစ်စ ဖုံးအုပ်လာသည်..။ မနီလည်း ထို့အတူပင်…။
ဤသည်မှာ ဖိုမ အစုံ ဒွန်တွဲလျက် ရှိသော လောကီ ကာမဘုံ၏ ဖြစ်လေ့တံထွာ ဓမ္မတာပင်…။
ထို့ကြောင့်လည်း မဃဒေဝ လင်္ကာက အောက်ပါအတိုင်း သတိပေးခဲ့သည်..။
“ သိမ်းဆည်းမဲ့ဘိ ၊ ကင်းသတိနှင့်
အသိပညာ ၊ မယှဉ်သသူ ၊ ထိုမျှလူတို့
ကျင့်မူဖောက်ပြား ၊ မတည်ကြားသည်
ကျော်ထူး အခန်းဝရောက်တော့ တုံ့ခနဲ တန့်သွားသည်.။ မနီက အရှေ့ဖက် နံရံကို ကျောပေးပြီး ဘယ်ဖက်ကို စောင်းလျက် ကလေး နို့တိုက်နေသည်….။ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းရှိ ညာဖက်ပေါင်ကို အနည်းငယ် ကွေးထားပြီး အောက်ဖက်ရှိ ဘယ်ဖက်ပေါင်ကိုမူ ခပ်ဆန့်ဆန့်လေး စင်းထားသည်..။
ကလေးခေါင်းကို သူမ၏ ဘယ်ဖက် လက်မောင်းပေါ်တင်ပြီး ဘယ်ဖက်ခြမ်း နို့ကို တိုက်နေခြင်း ဖြစ်သည်..။ စပို့ရှပ် အပျော့စား အင်္ကျီကို စုလိပ်ပြီး အထက်သို့ မတင်ကာ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဖော်ထားသည်..။ အပေါ်ပိုင်း ညာဖက် နို့အုံကြီးမှာ လွတ်နေသည်..။ စောစောက တဝက်တပျက်မျှသာ မြင်လိုက်ရသော နို့ကြီးကို အခုတော့ အထင်းသား အရှင်းသား ပီပီသသ ကြီး မြင်နေရသည်..။
အိစက်မို့ထွားလှသော ညာဖက်နို့အုံကြီးက တင်းရင်း ဝင်းဝါနေသည်..။ ဘယ်ဖက်ခြမ်း နို့အုံမှာမူ ခလေး၏ ခေါင်းနှင့် ကွယ်နေ၍ တဝက်တပျက်မျှသာ မြင်နေရသည်..။
ထမီကလည်း ပြေလျော့နေရာ အပေါ်ပိုင်း ညာဖက် ခြမ်း တင်ပါးဖွေးဖွေးကြီးမှာ တဝက်နီးနီးခန့် ပေါ်နေသည်..။ ထမီအောက်ပိုင်းအစကလည်း ဒူးကောက်ကွေး အထက်နားအထိ ရောက်နေရာ ပြည့်တင်း ဝင်းဝါသော ခြေသလုံးသားများက အထင်းသား အရှင်းသားကြီး ပေါ်ထွက်နေသည်..။
မနီက အရောင်တလက်လက် ထွက်နေသော ကြာရမ္မက် မျက်လုံးတို့ဖြင့် ကြည့်ရင်း ….
“ ဟဲ့…ဘာလို့ ရပ်ကြည့်နေတာလဲ…မောင်လေးရဲ့…ဒီကိုလာပါဆို…ကလေး နိုးသွားမှာ စိုးလို့ မမကို ခြင်ထောင် ထောင်ပေးစမ်းပါ…”
ခြင်ထောင် အထက်ကြိုးနှစ်စက မနီခေါင်းရင်း ဘက်မှာ ပုံသေချည်ထားပြီး လုံးလိပ်ထားသည်..။ ကျော်ထူးက ခေါင်းရင်းဘက်တွင် လုံးလိပ်ထားသော ခြင်ထောင် ခြေရင်းပိုင်းကို စုကိုင်လာပြီး ခြေရင်းဘက်က ကြိုးနှစ်ချောင်းတွင် ချည်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် ခြင်ထောင်ကို လှုပ်ခါပြီး ခြင်ထုတ်လိုက်သည်..။ ဘယ်ဖက်လက်မောင်း ပေါ်တွင် ကလေးအိပ်နေသဖြင့် မနီက ညာဖက်လက်ဖြင့် ခြင်ထောင်ခေါင်းရင်းပိုင်းကို ဆွဲဖိလိုက်ရာ ညာဖက်နို့အုံဖွေးဖွေးတင်းတင်းကြီးကို လှန်ပြလိုက်သလို ဖြစ်နေသည်..။
ကိုယ်ဟန်အနေအထားလည်း ပျက်ယွင်းသွားသဖြင့် အပေါ်ပိုင်း ထမီစက အောက်သို့ လျော့သွားရာ ဆီးခုံဝင်းဝင်းကြီးနှင့် စောက်မွှေးအုံ မဲမဲအုပ်အုပ်ကြီးကိုပါ မြင်လိုက်ရသည်..။
မနီက ဘာမှ မဖြစ်သလို မသိဟန် ဆောင်နေသည်..။ ကလေးကို လက်ဖြင့် ခပ်ဖွဖွလေး ပုတ်ရင်း အို့..အေး…အို…ချော့သိပ်နေလိုက်သေးသည်..။ မထူးတော့ပြီမို့ ကျော်ထူးပါ ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်လိုက်ရသည်..။ ခေါင်းရင်းရော ခြေရင်းပါ မကျန် လုံလုံခြုံခြုံ ဖြစ်စေရန် ဖိညှိပေးလိုက်သည်..။
သည်တော့…မနီရဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးဥဥကြီးတွေကို အနီကပ် မြင်နေရသည်..။ မနီ၏ ကျောဖက်ပိုင်းမှာ အရှေ့ဖက်နံရံတွင် ကပ်နေသဖြင့် ခြင်ထောင်စမှာ အောက်သို့ မရောက်ပဲ ကျောပြင်နှင့် နံရံ အကြားတွင် ညှပ်တင်နေသည်..။
ကျော်ထူးက အိပ်နေသော ကလေးကိုလည်း မထိခိုက်မိစေရန် ဒူးထောက်လျက် မနီ၏ ပခုံးသားပြည့်ပြည့်ကို လက်နှင့် ဆွဲကာ ခြင်ထောင်စကို အောက်ထဲ ထိုးသိပ်ပေးလိုက်သည်..။
ထို့နောက် ခါးလည်ပိုင်းကို ထိုးသိပ်ပေးသည်..။ ဖြူဝင်းဆူဖြိုးသော တင်ပါးကြီးကို လက်နှင့် ထိမိသွားသည်..။ ကျော်ထူးပေါင်ကြားရှိ လီးတန်ကြီးမှာ တောင်မတ်နေပြီဖြစ်ရာ ပုဆိုးထဲက ငေါထွက်နေသည်..။ အသက်ရှူသံတွေကလည်း ပြင်းထန်နေသည်..။ ရင်တွေပူ အာခေါင်တွေလည်း ခြောက်လာသည်..။
အရက်အရှိန်လေးကလည်း တက်နေသဖြင့် …
“ ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ ..ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်တော့ကွာ….”
ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီး ညာဖက်နို့အုံတင်းတင်းမို့မို့ကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် ကုန်းစို့ပစ်လိုက်ပါတော့သည်..။
မနီမှာ ယားလွန်းသဖြင့် လည်ပင်းကြောတွေ ထောင်ကာ ရင်အစုံ ကော့တက်နေသည်..။
“ ရှီး…အား…ယား….အီး ရှီး….ကျွတ်….ယား..ယား တယ်ကွာ….အဟင်းဟင်း….အဟိ…ခစ်…ခစ်……..”
အိပ်ပျော်နေသော ကလေးငယ်ကို အသာမ၍ စောင်ထူထူနှင့် ကာထွေးလျက် ခပ်ဝေးဝေးသို့ တွန်းပို့ထားလိုက်သည်..။ ကျော်ထူးက ထမီကို ပေါင်လည်လောက်ထိရောက်အောင် တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး ထွားအိဆူဖြိုးသော ဖင်ဆုံကြီးတဝိုက်ကို နှံ့စပ်အောင် ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးသည်..။
ပါးစပ်ကလည်း နို့ကို မခွာတမ်း စို့နေသည်..။ နို့ရည်တော်တော်များများ သူ့ဗိုက်ထဲ ရောက်ကုန်သည်..။ အားရှိသော လူနို့ကို စို့ရခဲသမို့ တပြွတ်ပြွတ် စို့လျက် ရှိရာ ကလေးငယ်ထက်ပင် ဆိုးနေပါတော့သည်..။
ဖင်ဆုံထွားထွားအိအိကြီးကို ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပေးရသည်မှာ အရသာရှိလွန်းလှသည်..။ မနီကလည်း အငြိမ်မနေ..။ ကျော်ထူးပွတ်ဆွပေးနေသမျှကို ဖီလင်အပြည့်ဖြင့် လူးကာလွန့်ကာ ခံစားရင်း ကျော်ထူး ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည်..။ ရှစ်လက်မခန့် ရှိသော လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးက အထက်သို့ ကော့၍ တောင်မတ်နေသည်..။
ဒစ်ကြီးက ပြဲလန်နေပြီး ဒစ်ဆီကြီးက နီညိုရောင်သမ်းကာ တင်းရင်းဝင်းပြောင်နေသည်..။ မနီက သူမနို့ကို တပြွတ်ပြွတ်စို့နေသော ကျော်ထူးခေါင်းကို ဆွဲမော့လိုက်သည်..။ ကိုယ်ကို လည်း ကျော်ထူးဖက်ရောက်အောင် ရွှေ့လိုက်ပြီး ပက်လက်အနေအထား ပြင်လိုက်သည်..။
“..ခစ် ခစ်….ဒီကလေးကြီးကလည်း ..ကွယ်….နို့ဆွဲ သိပ်သန်တာပဲ…ဟင်း..ဟင်း…….”
မနီက ပြောလိုက်ရင်း…ပုံစံပျက်သွားသော ကျော်ထူးခေါင်းကို သူမနို့အုံ ရှိရာသို့ ဆွဲယူပြီး နို့အုံတစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် အသာမယူကာ ကလေးနို့တိုက်သလို ကျော်ထူးပါးစပ်ဝသို့ နို့သီးခေါင်းကို တေ့ကပ်ပေးလိုက်သည်..။
ကျော်ထူးက နို့ကြီးကို ပြန်စို့ရင်း ဘယ်ဖက်လက်က မနီ၏ စောက်ဖုတ်အုံဖောင်းဖောင်းကြီးပေါ်သို့ ရောက်သွားပြီး ရွရွဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးသည်..။
စောက်ဖုတ်အုံကြီးက နွေးထွေးခုံးထနေသည်..။ လက်ခလယ်နှင့် ထက်အောက် လျှောတိုက်ပေးရင်း အက်ကွဲကြောင်းထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။ စောက်ရည်တွေက စိုရွှဲနေပြီး အတွင်းသားနုနုလေးတွေက ပူနွေး ရွအိနေသည်..။ ကျော်ထူးက လက်ခလယ်ကို အဆုံးထိအောင် ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဆေးမွှေသလို လှည့်ပတ်မွှေပေးသည်..။
စောက်ရည်တွေက အဆမတန် စိုရွှဲနေပြီမို့ တစွပ်စွပ် တပြွတ်ပြွတ်…အသံ ညှင်းညှင်းလေးတွေ ထွက်ပေါ်နေသည်..။ မနီလက်ကလည်း ကျော်ထူးပေါင်ကြားထဲက တောင်မတ်နေသော လီးတန်ပူပူနွေးနွေးကြီးကို ခပ်ဖွဖွလေး ဆုတ်ညှစ်ပေးရင်း ဂွင်းတိုက်သလို ပွတ်လျှောလေး လုပ်ပေးနေသည်..။
လီးနှင့်ပြတ်နေသည်မှာ တစ်ပတ်ကျော်ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်သော မနီတစ်ယောက် အသဲအသန် အငမ်းမရ ပင် ဖြစ်လောက်အောင် မွတ်သိပ်တောင့်တ နေပါသည်..။
အခုအားရကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းလွန်းလှသော ကျော်ထူး၏ လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို မြင်တွေ့ရ ကိုင်တွယ်ပွတ်ဆွနေရသောအခါ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အလွန်သိသာထင်ရှားစွာ မာန်ဖီခုံးတက် မောက်ကြွလာသည်..။
ကျော်ထူးက စောက်ခေါင်းထဲကို စိတ်ရှိလက်ရှိ မွှေနှောက် ထိုးဆွပြီးသောအခါ သူ့လက်ခလယ်ကို အလျားလိုက် စောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်း မြောင်းအတိုင်း အထက်ဆီသို့ ပွတ်ထိုးသွားပြီး စောက်စိငုတ်ပြူးပြူးကြီးနှင့် ထိတိုက်မိမှ ရပ်လိုက်သည်..။
ထို့နောက် စောက်စိငုတ်ကြီးကို လက်ခလယ်ထိပ်ဖြင့် ဝိုက်၍ ပွတ်ဆွ ကလိနေပြန်သည်..။ မနီတစ်ယောက် မျက်လုံးတွေ မဖွင့်နိုင်တော့ပဲ အံကိုကြိတ်လျက် ခါးကော့ ရင်မော့ကာ လူးလွန့် နေရတော့သည်..။
“ အီး….ရှီး….အီး ဟီး….ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်….အား…..အင်း…..အင်း…….အမေ့……..အီး…အား..ကျွတ်ကျွတ်….အ…အ..မေ့…..မောင်လေး….ရယ်….အီး…အီး ရှီး….ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ…ကွယ်…မမ….မနေနိုင်တော့ဘူး…အူး..ဟူး….အီးဟီး…ရှီး…ကျွတ်..ကျွတ်…လိုး…..လိုးပါတော့ နော်…..အင့်………အမေ့…ကျွတ် ကျွတ်….အင့်..ဟင့်…….”
အချိန်ဆွဲနေ၍ မဖြစ်ကြောင်း ကျော်ထူး နားလည်သည်.. ။ သူက ဒီအရပ်သား မဟုတ်..။ မနေ့ညကမှ ရောက်လာသူ ဖြစ်သည်..။ ကံကောင်း၍ မုတ်ဆိတ် ပျားလာစွဲသည်ကို အချိန် ဆွဲနေ၍ မဖြစ်တော့..။ ထို့ကြောင့် မနီ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို နံရံနှင့် လွတ်အောင် ခြင်ထောင်အလယ်လောက်ဆီ ဆွဲယူလိုက်သည်..။
ပြီးတော့ အိပ်ပျော်နေသော ကလေးငယ်ကိုလည်း သူတို့နှင့် ဝေးရာသို့ ညင်သာစွာ တွန်းရွှေ့လိုက်သည်…။
ကလေးငယ် ရှိနေသဖြင့် ဆန်းဆန်းပြားပြား လိုးနေ၍ မဖြစ်..။ ဒူးထောင်ပေါင်ကား အပေါ်က တက်မှောက် လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပဲ လိုးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ ကျော်ထူးက မနီ၏ ဖြူဖွေးတုတ်ခိုင်သော ပေါင်တံအိအိကြီးနှစ်ချောင်းကို ရင်ဘတ်ဖက်ဆီ တိုးကပ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ မို့တင်းဝင်းမွတ်နေသော နို့အုံထွားထွားကြီးနှစ်မွှာကို ခပ်ဖွဖွလေး ဆုပ်ချေပေးပြန်သည်..။ မနီက ကျေနပ်အားရသော မျက်နှာလေးဖြင့် ငြိမ်ခံနေသည်..။
“ မမ….ကျနော်…လှန်ထိုးတော့မယ်…နော်….. အင်္ဂါနဲ့ ကြာသာပတေး ဆိုတော့ ဘာလဲဟင်..”
မနီက ကြည်လဲ့လဲ့ အပြုံးလေးဖြင့် ရွှင်ရွှင်မြူးမြူးလေး ပြောသည်..။ ကျော်ထူးက ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ကာ သွေးကြောကြီးတွေ တင်းဖောင်းနေပြီး အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထလျက်ရှိနေသော သူ့လီးတန်ကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝသို့ တေ့မြုပ်လိုက်ပြီး သူ့ဖင်ကြီးကို ရှေ့သို့ တရွေ့ချင်း တွန်းပို့လိုက်သည်..။
ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီး နစ်ဝင်သွားသည်နှင့် မနီ၏ မျက်နှာမှာ အားရကျေနပ်စွာ ရှုံ့မဲ့သွားသည်..။
လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲသို့ တစ်ရစ်ချင်း တစ်ရစ်ချင်း နစ်နစ်ဝင်သွားသည်..။ လီးတန်ကြီးနှင့် အတူ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား တွေပါ အဖော်အဖြစ် နစ်ပါသွားသည်..။ တဖန် လီးတန်ကြီးကို ပြန်နှုတ်ပြန်သည်..။ ထိုအခါ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းအလွှာကြီးက လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးနှင့်အတူ အပေါ်သို့ ကြွတက် ပါလာပြန်သည်..။
ယခု တဖန် ပြန်ထွက်လာသော လီးတန်ကြီးမှာ စောစောကနှင့် လုံးဝ မတူတော့..။ စောက်ရည်ကြည်များဖြင့် စိုရွှဲကာ တင်းပြောင် ဝင်းလက်လာသည်..။ စံချိန်မှီ လီးတန်ကြီးကို အလိုးခံရနေပြီမို့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ လှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ ယားကြွလာသည်..။ ကျော်ထူးက သူ့လီးတန်ကြီးကို အသွင်းအနှုတ် လေးငါးချီလောက် ပြုလုပ်ပြီးနောက် အရှိန်ရလာသော အမြန်ရထားကြီးပမာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လေး ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ဆောင့် လိုးပါတော့သည်..။
တဖွတ်ဖွတ် တပြွတ်ပြွတ်…အသံများ ၊ အီး အင်း အား…အမလေး….အသံများဖြင့် ထပ်ခိုးအခန်းလေးထဲမှာ ဆူညံပွက်လော ရိုက်နေစဉ်…
မိန်းမတစ်ယောက် ထရံပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်နေသည်..။ ကျော်ထူးနှင့် မနီတို့ က အသဲအသန် လိုးနေကြသလို ထိုမိန်းမကလည်း ဇွဲသန်သန်နှင့် ချောင်းကြည့်နေပါသည်..။
ချောင်းကြည့်နေသော မိန်းမလည်း ၅၃ ကို မလှန် ထိုးဖို့ ခပ်သွက်သွက်လေး ဆင်းခဲ့ရပါတော့ သတည်း….။
ကျော်ထူးတစ်ယောက် ညနေ ၅ နာရီကျော်မှ ပြန်ရောက်လာသည်..။ ထိုအချိန်တွင် မလှရီတစ်ယောက် ရေမိုးချိုးပြီး သီချင်းလေး တအေးအေးနှင့် သနပ်ခါး လိမ်းနေသည်..။
သူ့သမီးနှစ်ယောက်က အိမ်အောက်ထပ် အရှေ့ခန်းထဲတွင် ကာတွန်းကား ကြည့်နေကြသည်..။ ကျော်ထူးပြန်လာတာ မြင်တော့ မလှရီက သနပ်ခါး လိမ်းနေရာမှ …
“ ဟဲ့…..ကျော်ထူး….ထမင်း စားတော့လေ…….”
“ ဟုတ်ကဲ့…….မမ..အစ်ကို ပြန်လာမှ စားတော့မယ်…”
“ ဟဲ့….နင့်အစ်ကိုက ဒီည ပြန်လာမှာ မဟုတ်ဖူး……..”
“ အဲဒါဆိုလဲ…..မဆာသေးလို့….ပြီးမှ စားတော့မယ်……..မမ…”
“ နေစမ်းပါအုံး….နင်က မနက်ကထဲက ထွက်သွားလိုက်တာ….အခုမှပဲ ပြန်လာတော့တယ်… အကျိုးအကြောင်းလဲ ပြောမသွားဘူး….. ဒီက စိတ်ပူလိုက်ရတာ..ဟွန်း…မနေ့ညက ရောက်လာလို့သာ တော်တော့တယ်…….”
မလှရီ အသံထဲတွင် မကျေမနပ် ဒေါသ သံတွေ ပါနေသည်..။ ကျော်ထူးကလည်း ပြောစရာပင်…။ မနေ့ညက ရောက် ၊ ဒီနေ့မနက် မနီနှင့် အချစ်စခန်း သွား..၊ မနီတစ်ယောက်လည်း ကျော်ထူးအပေါ် တော်တော် လေး စွဲလန်းသွားပုံ ရသည်..။
နောက်ရက်တွေ လည်း ဒီအချိန်မျိုး လာခဲ့ဖို့ မှာလိုက်သေးသည်..။ ညနေကစလို့ ည ဆယ်နာရီလောက်ထိ အရက်သောက်သူတွေ ရှိသည်..။ သူ့မောင်နှင့် သူ့ယောက်မတို့ အရက်လာကူရောင်းကြကြောင်း ၊ ထို့ပြင် အဲဒီအချိန်မျိုးမှာ မချောင်ကြောင်း လည်း သတိပေးလိုက်သည်..။
ကျော်ထူးက သူ့အပြစ်နှင့် သူမို့ လေပြေ ထိုးလိုက်သည်..။
“ အော်…..ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ မြို့ထဲရောက်သွားတာပါ….မမရ……အဟင်းဟင်း…….”
“ ဟွန်း…….အခုမှ လာပြီး လေပြေ ထိုးမနေပါ နဲ့…..”
ကျော်ထူး အိမ်ပေါ်ထပ် တက်ခဲ့သည်..။ မနီက သူ့ကို စောက်ဖုတ်ရော ၊ ထမင်းပါ အဝအအီ ကျွေးလွှတ်လိုက်သည်..။ ကျော်ထူး မနီ အရက်ဆိုင်က အပြန် ဆေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် တွေ့၍ စံချိန်မီ ဆေးဆီ တစ်ဗူးနှင့် မက်စ်မန်း ဆေးတောင့် လေးတောင့် တစ်ကဒ် ဝယ်ခဲ့သည်..။ သည်ဆေးနှစ်မျိုးက မိန်းမပေါင်ကြားရှိ ကာမဗဟို ဌာနချုပ် တည်းဟူသော စောက်ဖုတ် အဟာရကို အလျင်မပြတ် စားသုံးနိုင်ရန် အတွက် အထောက်အကူ ပြု အားဖြည့်ဆေးဝါးများ ဖြစ်သည်..။
သူ့အတွက် နေရာပေးထားသော အိမ်အပေါ်ထပ်ရှိ အခန်းထဲ ရောက်သောအခါ အဝင်တံခါးကို စေ့၍ စံချိန်မှီ ဆေးဆီ ကြော်ငြာများကို ဖတ်ကြည့်နေသည်..။
“ ခြောက်သွေ့ ညှိုနွမ်း မလန်းဆန်းပဲ
ပူပန် စိုးထိတ် သင်စိတ်မညစ်နဲ့
ကျားမာန် ဝင့်ချီ ဆန္ဒပြည့်မည်
ဤ စာသားလေးကို ဖတ်၍ ကျော်ထူး ပြုံးလိုက်မိသည်..။ မနီယောက်ျား ပြန်မရောက်မချင်း နေ့စဉ် ရက်ဆက် ကာမစစ်ပွဲ ဆင်နွဲရန်အတွက် သူ့ပေါင်ကြားမှ ဒုံးကျည်ကို စံချိန်မှီ နှင့် ကျားကန်ပေးထားဖို့ လိုမည်…။ ထို့နောက် စံချိန်မှီ လိမ်းဆေးဆီ သုံးစွဲရန် အညွှန်းကို ဆက်ဖတ်သည်..။
“ မိမိ၏ လိင်အင်္ဂါကို ရေနွေးဆပ်ပြာ နှင့်စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြော ၊ ခြောက်သွေ့စေပြီးလျင် ဆေးဆီ လေးငါးစက်မျှကို လိင်တံတစ်ခုလုံး အတွင်းသားရော ပေါ်အရေပြားကိုပါ နှံ့အောင် ကောင်းစွာ ပွတ်သပ်နှိပ်နယ်၍ လိမ်းပေးပါ…။ တစ်ခဏအတွင်း တောင့်တင်း သန်မာလာပါလိမ့်မည်…။ ပန်းသေ ရောဂါ ပြင်းထန်သူများ အမြဲသုံးစွဲပါက မကြာမီ ပန်းပြန်လန်းလာပါလိမ့်မည်..။ သာမန် အချိန် ပန်းလန်းနေစဉ်ထက် ဤ ဆေးလိမ်းပြီး ပန်းလန်းလာသောအခါ လိင်တံပေါ်ရှိ အကြောများ ဖုထစ်ကြွရွလာခြင်းဖြင့် ဆေး၏ အစွမ်းသတ္တိကို သိရှိရပါမည်..။ ဤ ဆေးဆီကို တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ် လိမ်းရုံနှင့် လူတိုင်းအား စိတ်ရှိသလို ကြီးထွားစေမှု မပြုနိုင်စေကာမူ သိသာရမည်..။ ထင်ရှားရမည်..။ ပိုမို သန်မာလာ၍ သုတ်ကို ကောင်းစွာ ထိန်းနိုင်ကြောင်း အာမခံပါသည်..။
အထူးစွမ်းသော စပါယ်ရှယ် ဆေးဗူး…”
ကျော်ထူးတစ်ယောက် စံချိန်မီ ဆေးဆီပုလင်းကို ဖွင့်၍ အညွှန်းအတိုင်း လိမ်းပါတော့သည်..။
မလှရီတစ်ယောက် နေ့လည် ၁ နာရီလောက်က အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်လည် မြင်ယောင်ကာနေမိသည်..။
“ ဒီနား ခဏ…” ဆိုပြီး ထွက်သွားသော ကျော်ထူးတစ်ယောက် တော်တော်နှင့် ပြန်ပေါ်မလာ..။ မလှရီမှာတော့ ထမင်းပွဲ ပြင်ပြီး စောင့်နေသည်.။ ထမင်းစားရင်း သူ့ယောက်ျား ကိုသန့်စင် အကြောင်းကို သူ့ညီ ကျော်ထူးအား ပြောပြ တိုင်ပင်အုံးမည် ဟု စိတ်ကူးထားသည်..။
နာရီကြည့်ရင်း ကျော်ထူးအလာကို စောင့်မျှော်နေရာ တစ်နာရီသာ ထိုးသွားပြီး ခွေးကောင်လေးက ပေါ်မလာ..။ ထို့ကြောင့် စိတ်တိုတိုနှင့် ထွက်လာခဲ့သည်..။ မနေ့ညကမှ ရောက်လာသူဆိုတော့ ဘယ်သွားတတ်မှန်းလည်း မသိ..။ ထိုစဉ် စိတ်ကူးထဲ ဖြတ်ခနဲ အသိတစ်ခု ပေါ်လာသည်..။ မနီတို့ အရက်ဆိုင်များ ရှိလေမလားဟူသော အတွေးဖြင့် ဦးတည် ထွက်လာခဲ့သည်..။
သူ့ယောက်ျား ကိုသန့်စင်မှာ မနီညီမ ခင်သီတာနှင့် တိတ်တိတ်ပုံး ညားနေကြသည်..။ ခင်သီတာက မြို့သစ်မှာ သူ့အမေနှင့် အတူနေသည်..။ စောစောကတော့ အချောင်ကြံတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်..။ ယခုတော့ တရားဝင် ပေါင်းသင်း နေထိုင်သည့် အဆင့်သို့ပင် ရောက်နေကြပြီ..။
ကိုသန့်စင်ကလည်း သူ့မိန်းမ မလှရီကို အကြောင်းစုံ ဖွင့်ပြောပြထားပြီး ဖြစ်သည်..။ ကြားကြားချင်းတော့ မလှရီ တစ်ယောက် မြွေပွေး အကိုက်ခံရသလို ဆတ်ဆတ်ခါ နာကျည်းခဲ့သည်..။ ကိုယ်ဝန်ပါ ရှိနေပြီဖြစ်၍ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ပဲ မယားငယ် အဖြစ် တရားဝင် ယူရတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုသန့်စင်က ရှင်းပြသည်..။
မင်းတို့ မိသားစုကိုလည်း လုံးဝ ပစ်ထားမှာ မဟုတ်ကြောင်း..။ အစစအရာရာ ယခင်အတိုင်း ပြည့်စုံအောင် ထားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အခုဟာက ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့သည့် အဆင့်ရောက်နေသည့်အတွက် ယူရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မေတ္တာ ရပ်ခံ ရှင်းပြပါသည်..။
ခင်သီတာ ဆိုသည့် ကောင်မက ရပ်ကွက်မြောက်ထိပ် အရက်ဆိုင်က မနီ ၏ ညီမ အရင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြပါသည်..။ တစ်ပတ်လျင် ခင်သီတာဆီမှာ ၃ ည အိပ်လေ့ ရှိသည်..။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ည ခင်သီတာဆီမှာ အိပ်မှာမို့ ကိုသန့်စင် အိမ် ပြန်မလာခြင်း ဖြစ်သည်..။
သူ့ညီ ကျော်ထူးမှာ သူ့အစ်ကိုအကြောင်း ဘာမှ သိပုံမရ..။ ထို့ကြောင့် ထမင်းစားရင်း ပြောပြမည်ဟု စိတ်ကူးထားရာ ကျော်ထူးပြန်မလာသဖြင့် သူ့အစ်ကို၏ မယားငယ် အစ်မတော်စပ်သော မနီ၏ အရက်ဆိုင်ကို ဖြတ်ခနဲ သတိရကာ ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်.။
မနီအရက်ဆိုင်ရောက်တော့ ဆိုင်ထဲတွင် လူရှင်းနေသည်..။ ဆိုင် အဝင်ပေါက် ညာဖက်ဘေး စားပွဲခုံပေါ်တွင်သောက်လက်စ အရက်ပုလင်း ၊မြင်းခွာရွက်သုတ် ပန်းကန်..၊ ကွမ်းယာထုတ် တစ်ထုတ် ၊ အားကစား ဂျာနယ်တစ်စောင် တို့ကို တွေ့ရသည်..။
ကျော်ထူး အိမ်က ထွက်သွားစဉ် လက်ထဲမှာ ဂျာနယ် တစ်စောင် ပါသွားသည်ကို မလှရီ သတိရမိသည်..။ ထို့ကြောင့် ဂျာနယ်ကို ကောက်ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်..။ သန့်စင် ဟု ရေးထိုးထားသည့် သူ့ယောက်ျား လက်မှတ်ကို တွေ့ရသည်..။ သေချာပြီ…ကျော်ထူး ဒီဆိုင်ထဲမှာ ရောက်နေပြီ…။ သို့သော် လူကို မတွေ့ရ..။ ပြီးတော့ မနီ၏ အရိပ်အယောင်ကိုလည်း မတွေ့ရ..။
မလှရီ အပေါ်ထပ် ထပ်ခိုးပေါ်သို့ နားစွင့် ကြည့်သည်..။ ထပ်ခိုးပေါ်မှ လှုပ်ရှားသံ သဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်..။ မလှရီလည်း ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ထပ်ခိုးပေါ်သို့ တိတ်တဆိတ် တက်လာခဲ့သည်..။ သေချာသွားပြီ..။ လှေခါးခြေရင်းမှာ ကျော်ထူး ဖိနပ်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ခြေသံလုံလုံဖြင့် လှေခါးပေါ် တက်လာလိုက်သည်..။ တဖြည်းဖြည်း အသံတွေကို ပိုမို ကြားလာရသည်..။ အခန်းတံခါးကို ပိတ်ထားသည်..။ အခန်းမှာ ထရံကာ ဖြစ်၍ ချောင်းကြည့်စရာ အပေါက်တွေ ရှာရန် မခက်လှ..။
မလှရီလည်း ခဲတံလုံးလောက်ရှိသော ထရံပေါက်မှ အတွင်းသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်..။ မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြီးက မလှရီကို အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်ချောက်ချား သွားစေသည်..။
“ အမလေးလေး…..မနီ နဲ့ ကျော်ထူးတို့ လိုးနေကြတာ ပါလား…….”
မလှရီ တစ်ယောက် ထရံပေါက်မှ ချောင်းကြည့်ရင်း စိတ်ထဲက ဘုရားတမိသည်…။ နို့စို့ ကလေးငယ်က သူတို့နှင့် မလှမ်းမကမ်းမှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျနေရှာသည်..။ မနီက အောက်ကနေ သူမရဲ့ ဒူးနှစ်လုံးကို ထောင်ကာ ပေါင်ကြီးတွေ ဖြဲကားပေးထားရာ ကျော်ထူးက အထက်မှနေ တက်မှောက်ရင်း ဖင်ကြီး ကြွကာ ကြွကာ ဖြင့် ဆောင့်လိုးနေသည်.။
ဆောင့်ချက်တိုင်း ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာ ကျောကြီးက သိသာ ထင်ရှားစွာ ရှုံ့ခွက်ဝင်သွားကာ အသားပြင်တွေ က လှုပ်ရှားနေသည်..။ မုန်ထနေသော ဝက်သိုးကြီး တစ်ကောင်အလား အသဲအသန် အရူးအမူး ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေပါတော့သည်..။
မနီကလည်း အောက်ကနေ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးတွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားလျက် သူမ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပြီး အားရပါးရ ခံကာနေသည်.။
လိုးသူနှင့် ခံသူ အပေးအယူမျှလျက် လိုးခြင်းအမှု ပြုနေကြသည်မှာ အားရစရာ ကြက်သီးထစရာကြီး ဖြစ်နေပါတော့သည်..။ မလှရီ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ စစ်ခနဲ ကျင်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ကြီး တစ်အုံလုံး တင်းမာ ခုံးကြွလာသည်..။
ကျော်ထူးက အရှိန်အဟုန် ပြင်းထန်စွာ ဒလစပ် ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေသလို မနီကလည်း တအီးအီး တအားအားဖြင့် မြည်တမ်းလျက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ကော့ကော့ခံလျက် နေသည်..။
“ အမလေး…ကောင်းလိုက်တာ..မောင်ရယ်….ပြောမပြတတ်အောင်ကို ကောင်းတာ….မမဖြင့် ဒီလောက်တောင် လိုးတတ် လိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တကယ် မထင်ဘူး…..”
မနီစကားဆုံးသည်နှင့် ကျော်ထူးက ဆောင့်သည့် အရှိန်ကို ဗြုန်းခနဲ ရပ်ပစ်လိုက်ပြီး… သူ့ဖင်ကြီးကို ကြွ၍ လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်..။
“ ဟင်…ဒီမှာ တအားကောင်းနေတာ…ဘာ….ဘာ လုပ်တာလဲ….မောင်လေး….ရဲ့….အီး….ဟင့်…ဟင့်…”
မနီက ဇောကြွနေသော အသံကြီးဖြင့် ပျာပျာသလဲ မေးသည်..။ ပြီးတော့ သူမ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းဖြင့် ကျော်ထူးခါးကို လှမ်းပြီး ဆွဲချိတ်ထားလိုက်သည်..။
ကျော်ထူးက သူ့ကိုယ်ကြီးကို ကုန်းထရင်း…
“ ခဏလေး ဖယ်ပေးပါ အုံး ….မမရ…ပုံစံ တစ်မျိုး ပြောင်းချင်လို့ပါ……..”
ဒီတော့မှ မနီက ချိတ်ထားသော ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဖြေပေးလိုက်သည်..။ လီးတန်ကြီး ကျွတ်သွားသော အခါ မနီစောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမှာ အနည်းငယ် ပြဲဟလျက် အတွင်းသားနုနုတွေက ရွစိရွစိ လှုပ်လျက် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်..။
ကျော်ထူးက ဘေးတွင် ပုံထားသော သူ့ပုဆိုးကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး မနီကို ကျောပေးကာ မတ်တတ်ရပ်လျက် လီးတန်ကြီးတွင် စိုရွှဲ ပေပွနေသော စောက်ရည်တွေကို သုတ်ပစ်လိုက်သည်..။
မနီ စောစောက တစ်ချီပြီးသွားကြောင်း ကျော်ထူး သိလိုက်သည်..။ သူက တစ်ချီမှ မပြီးသေး..။ ယခု ပေပွနေသော အရေတွေမှာ မနီစောက်ခေါင်းထဲက ပန်းထွက်ခဲ့သော သုတ်ရေတွေ ဖြစ်သည်..။ ကျော်ထူးက မနီကို ကျောပေးပြီး မတ်တတ် ရပ်နေသဖြင့် ချောင်းကြည့်နေသော မလှရီနှင့် လီးတန်ကြီးမှာ ထရံ တစ်ချပ်သာ ခြားသည်..။ ကျော်ထူးပေါင်ကြားက လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို နီးနီးကပ်ကပ် မြင်လိုက်ရသောအခါ မလှရီ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ရမ္မက်သွေးတွေမှာ ပူလောင် ပွက်ထ လာတော့သည်..။
လီးတန်ကြီးမှာ နည်းတဲ့ဟာကြီး မဟုတ်…။ အတုတ်က သူမ လက်တစ်ဆုပ် မမိနိုင်လောက်အောင် ..ရှိပြီး…အရှည်မှာလည်း သူမ လက်တစ်ထွာပင် မကလောက်…။ ဒစ်ကြီးကလည်း ပြဲအာလန်နေသည်..။ ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီးက နီညိုရောင်သန်းကာ တင်းရင်း ဝင်းပြောင်နေသည်..။ လီးတန်ကြီးကို ယှက်သန်းထားသော သွေးကြောကြီးတွေက ဖုဖောင်းနေပြီး အကြော အပြိုင်းပြိုင်း ထကာ တောင်မတ်ကော့တက်နေသည်..။
မလှရီ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေသည်..။ အသက်ရှူသံတွေလည်း မြန်ဆန်နေသည်..။ ဖြစ်နိုင်လျင် အခန်းထဲ ပြေးဝင်ပြီး ကျော်ထူးလက်ကို ဆွဲကာ အိမ်သို့ ခေါ်သွားလိုက်ပြီး သူမကိုသာ တက်လိုးခိုင်းလိုက်ချင်သည်..။ အခုတော့ ထမီကို လှန်ပြီး သူမပေါင်ကြားမှ ဖောင်းကြွရွထနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်ဝါးနှင့် ဖိပွတ်လိုက်ရပါတော့သည်..။
သူမစောက်ဖုတ်ကြီးက မာတင်း ခုံးထနေပြီး စောက်ရေတွေကလည်း ဘုံဘိုင်ခေါင်းမှ ရေကျထားသလို တစက်စက်နှင့် ယိုစီး စိမ့်ထွက်ကျနေသည်..။ ကျော်ထူးက မနီဖက် ပြန်လှည့်သွားရာ မလှရီကို ကျောပေးလျက် အနေအထား ဖြစ်သွားရပြန်သည်..။
ကျော်ထူးက မတ်တတ်ရပ်ရင်း မနီထံ သူ့လက်ကို လှမ်းလိုက်သည်..။ မနီက ကျော်ထူးလက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး ထလိုက်သည်..။
နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသော အခါ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တင်းကျစ်နေအောင် ဖက်ထားလိုက်ကြသည်..။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့အပ်ကာ စုတ်နမ်းကြသည်..။ တပြွတ်ပြွတ်နှင့် နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နေကြသည်မှာ အတော်လေး ကြာသည်..။
ကျော်ထူးလက်တွေက မနီ၏ ဖင်ဆုံထွားထွားအိအိကြီးကို တအားနဲ့ပင် ဆုပ်ချေပွတ်နယ်နေသလို မနီလက်တွေကလည်း ကျော်ထူးကျောပြင်ကြီးကို အားမလိုအားမရဖြစ်နေသလို ပွတ်သပ်လိုက် ဆွဲကုတ်လိုက် ရွရွလေး ပွတ်သပ်ပေးလိုက် လုပ်ပေးနေသည်..။ ကျော်ထူးလီးတန်တုတ်တုတ်နွေးနွေးကြီးက မနီ၏ မာန်ဖီခုံးထနေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို ဖိထောက်ထားသည်..။
ကျော်ထူးက သူ့လျှာကို မနီပါးစပ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်.။ မနီကလည်း အဆင်သင့်ပင် ခပ်မြှင်းမြှင်းလေး ဆွဲစုပ်ပေးရင်း သူမ၏ လျှာဖြင့် ပြန်လှန် ပွတ်တိုက်ပေးနေသည်..။ ကျော်ထူးက နှုတ်ခမ်းချင်း ခွာလိုက်ပြီး…
“ မမ…လေးဖက်ထောက် ဖင်ကုန်းပေးနော်….”
“ အမလေး…ဘုရား ဘုရား…ဖင်…ဖင်လိုးမလို့လား….ဟင်…….”
“ အား..ဟား ဟား…..မဟုတ်ပါဘူး…မမရဲ့…စောက်ဖုတ် ပဲလိုးမှာပါ…မမကလဲ….”
“ သိနိုင်ဘူးလေတော်….စောက်ဖုတ်တောင် ဒီလောက် အီစလံဝေနေအောင် ခံနေရတာ….တော့လီးကြီးနဲ့ ဖင်များ လိုးလိုက်ရင် ကွဲပြဲ စုတ်ပြတ်သွားမှာ ကြောက်လို့ တော်ရေ့….”
မနီက ကျော်ထူးအလိုကျ လေးဖက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည်..။ တတောင်ဆစ် နှစ်ဖက်က အိပ်ယာပေါ် ထောက်ထားပြီး ခါးလေးကို ညွှတ်လျက် ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးထားရာ စွင့်ကားလွန်းလှသော ဝိုင်းဝိုင်းအိအိ ဖင်အိုးကြီးနှစ်မွှာမှာ ကျော်ထူး ရမ္မက်မီးလျှံကို တဝုန်းဝုန်း တောက်လောင်စေသည်..။ ကျော်ထူးက စွင့်စွင့်ကားကား ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား ရှိလွန်းလှသော ဖင်ဆုံကြီးနောက်တွင် ဒူးထောက်လျက် မုဆိုးထိုင် ထိုင်လိုက်သည်..။
ထို့နောက် သူ့လီးတန် တုတ်တုတ်ကြီးကို လက်နှင့် ကိုင်လျက် ပူနွေးနူးညံ့သော စောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြီးထဲသို့ တေ့မြှုပ်ထားလိုက်သည်..။
“ မနေ့…က ထွက်တာ…၃၅ နော်…….”
“ ၃၅ ဆိုတော့ အင်္ဂါ ကြာသာပတေး စ..ဖ..ပေါ့နော်……..”
“ ဟုတ်ပါတယ်…လို့ ဆိုနေ…”
မနီအသံက ရမ္မက်ဇောတွေ ထန်နေပြီး စိတ်မရှည်တော့ဟန် ပေါ်လွင်နေသည်..။
“ အဲဒီ …စဖ ဆိုတာ ဘာလဲ…ဟင်……”
မနီက ပါးစပ်ကလည်း ပြော သူမ ဖင်ဆုံကြီးကိုလည်း နောက်သို့ ပစ်ပစ်ကော့တွန်းပေးလိုက်သည်..။ ထိုအခါ ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီးက စောက်ခေါင်းအတွင်းသားနုနုတွေ ထဲသို့ နစ်ဝင်သွားသည်..။
“ အဲဒီ စ ဖ ကို လှန်ထိုးရင် ဘာလဲ ဟင်…မမ…”
“ ..ဖွတ်…စွတ် …ပေါ့ဟာ……….ကဲ…ကဲ…..”
မနီက ဒေါဖောင်းနေသံနှင့် ပြောရင်း သူမဖင်ဆုံကြီးကို နောက်သို့ ဆတ်ခနဲ ပစ်တွန်းဖိကော့ လိုက်ပြန်သည်..။ ၈ လက်မခန့် ရှည်သော လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးမှာ ၃ လက်မလောက် နစ်ဝင်သွားပြန်သည်.။
“ မောင်လေးတို့ လိုးပြီးရင် အဲဒီ ဂဏန်း ထိုးရအောင် နော်…မမ…..”
“ အင်းပါ…ဟဲ့….ဒီမှာ စောက်ဖုတ်ကြီး တစ်ခုလုံး လှိုက်ယားထနေပြီ…ကြာရင် ပွင့်ကန်ထွက်တော့မယ်….အဟင့်ဟင့်..အီး….အိ…အင့်…….”
မနီတစ်ယောက် အလိုးခံချင်စိတ်တွေ က ငယ်ထိပ်ထိ တက်နေပြီ ဖြစ်၍ ငိုသံပါကြီးနှင့် ပြောလိုက်သည်..။ သည်တော့မှ ကျော်ထူးက မနီ ခါးသွယ်သွယ်လေးကို ခပ်တင်းတင်း ဆွဲဖက်ကာ သူ့လီးတန်ကြီးကို အဆုံးတိုင် ဝင်သွားအောင် ဖိသွင်းချလိုက်ပါတော့သည်..။
မနီတစ်ယောက် ခေါင်းနှင့် မွေ့ယာခင်း ထိလျက် ပါးစပ်လေး ပွင့်ဟကာ အားရကျေနပ်စွာ ညီးညူလိုက်ပါတော့သည်..။
ထိုအခိုက်မှာပင် မလှရီတစ်ယောက် ချောင်းကြည့်နေရာမှ ခြေသံလုံစွာနှင့် ဆုတ်ခွာလာခဲ့ပါသည်..။ လက်ထဲမှာ ငွေတစ်သောင်းခွဲ ရှိသည်..။ “ ဖွတ်..စွတ်…” တစ်ပေါက်ထဲ အောချလိုက်မည်..ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ အောက်ထပ်ရောက်သောအခါ မလှရီ ကျော်ထူး၏ လက်ကျန်အရက်များကို လက်နှစ်လုံးစာလောက် ချန်ခဲ့ပြီး အကုန်မော့သောက်လာခဲ့သည်..။
အိမ်ပြန်ပြီး ငွေတစ်သောင်းခွဲ ယူသည်..။ ပြီးတော့ လက်ခွဲဒိုင် ခင်မာရီထံသွားပြီး ၅၃ တစ်ပေါက်ထဲ ထိုးချလိုက်သည်..။
စိတ်ထဲကလည်း ဤအတိုင်း ကြုံးဝါးလိုက်သည်..။
“ ပေါက်လိုက်စမ်းဟယ်….ဖွတ် စွပ်….ဖွတ်စွပ်……”
ကျော်ထူးကို စောင့်ရင်း ၄ နာရီခွဲသွားသည်..။ မကြာမီ မျက်စောင်းထိုး နှစ်အိမ်ကျော်မှ စက်ချုပ်သမ အုပ်စု၏ ၅၃ တဲ့ဟေ့….ဟူသော အသံကို ကျယ်လောင်စွာ ကြားလိုက်ရသည်..။ တဒင်္ဂ အတွင်း မလှရီ နှလုံးသွေး တွေ ရပ်တန့်သွားမတတ် ဖြစ်သွားရတော့သည်..။
မလှရီတစ်ယောက် သနပ်ခါး လိမ်းရင်း နေ့လည်က အကြောင်းကို ပြန်ပြောင်း စဉ်းစားမိရာမှ ကျော်ထူးကို ခေါ်ပြီး ငွေသွားထုတ်ရန် အိမ်ပေါ်ထပ်သို့ ထမီရင်လျားကြီးဖြင့် တက်လာခဲ့သည်..။
ကျော်ထူးအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး သိခဲ့ပြီမို့ အနာဂတ်အတွက် စီမံကိန်းတွေ ချလျက် ရှိသည်..။ ကျော်ထူးအခန်းနား ရောက်သောအခါ တံခါးစေ့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်..။ တံခါးက လက်တစ်လုံးခန့် ဟနေသည်..။ ထိုဟနေသော နေရာမှ အတွင်းသို့ အသာချောင်းကြည့်လိုက်သည်..။
သဲထိတ်ရင်ဖို မြင်ကွင်းကြီးကို ဒုတိယအကြိမ် မြင်လိုက်ရပြန်သည်..။ ကျော်ထူးတစ်ယောက် ခုတင်စောင်းတွင် ခြေတွဲလောင်း ချကာ ပုဆိုးကို ပင့်လှန်လျက် ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲပြီး ဆေးလိမ်းနေသည်..။
အခန်းပေါက်ဖက်ကို မျက်နှာမူထားသဖြင့် ပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးကို အထင်းသား မြင်နေရသည်..။ ကျော်ထူးက ဘယ်ဖက်ဘေးတွင် ချထားသော ဆေးပုလင်းထဲမှ ဆေးစက်များကို ညာဖက်လက်ဖဝါးထဲ ထည့်လိုက်သည်..။ ထိုအခိုက်ဝယ် ပေါင်ကြားထဲက လီးတန်ကြီးမှာ အထက်သို့ ကော့ထောင်လျက် တောင်မတ်နေသည်..။ သွေးကြောကြီးတွေက ဖုဖောင်းပြီး လီးတန်ကြီးကို ဖုံးအုပ်ထားသော အရေပြားများမှာ အရစ်အရစ်တွေ ထလျက်ရှိနေသည်..။
ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီးက နီညိုရောင်သမ်းနေပြီး ဆေးဆီလိမ်းထားသဖြင့် ဝင်းပြောင်တင်းကားနေသည်..။
မြင်ရုံနှင့် တုတ်ခိုင်မာကျောမည့်လီးတန်ကြီးမှန်း မလှရီ အကဲခတ်မိသည်..။ လီးတန် အတုတ်မှာ ၇ လက်မခန့်ရှိပြီး အရှည်က ၈ လက်မခန့် ရှိရာ အလွန်ရှားပါးသော စံချိန်မီ လီးကြီး ဖြစ်နေပါတော့သည်..။
လီးတန်ကြီးကို ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း မလှရီ စိတ်တွေ ထကြွလာသည်..။ စောက်ဖုတ်အတွင်းမှလည်း လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားကြွလာသည်..။ ဟိုနေရာ ဒီနေရာက ဒိတ်ခနဲ ဒိတ်ခနဲ လှုပ်လှုပ်သွားသည်..။
ကျော်ထူးက ညာလက်ဖဝါးထဲရှိ ဆေးဆီများဖြင့် တောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးကို နှံ့စပ်အောင် သုတ်လိမ်းလိုက်သည်..။ ထို့နောက် အထက်သို့ ကော့ထောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို အောက်သို့ ဖိဖိဆွဲချသည်..။ ထိုသို့ ဆွဲချလိုက်တိုင်း ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီးမှာ တင်းခနဲ တင်းခနဲ အစ်အစ်ထွက်သွားသည်..။
မလှရီ စောက်ခေါင်းထဲ ကျင်ခနဲ စစ်ခနဲ ဖြစ်သွားရပြီး စောက်ရေတွေ စိမ့်ထွက်ယိုစီးကျလာတော့သည်…။ ထမီကို မ လှန်လိုက်ပြီး စောက်ခေါင်းထဲ လက်ခလယ်သွင်းကာ ထိုးဆွမွှေနှောက်လိုက်သည်..။
ကျော်ထူးက လီးတန်ကြီးကို လက်ဖဝါးနှင့် လိမ်ပြီ ဆွဲဆွဲဆန့်သည်..။ ပြီးတော့ ဂွင်းတိုက်သလို ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပေးပြန်သည်..။
ဒီမျှ အဖိုးတန် အမျိုးမှန်သော လီးတန်ကြီးကို မနီဆိုတဲ့ ကောင်မနှင့် မပတ်သက်စေချင်တော့..။ ခံချင်းခံ သူမသာ အားရအောင် ခံမည်..။ ကျော်ထူးသည် သူမယောက်ျား ကိုသန့်စင်၏ ညီအရင်းခေါက်ခေါက် ဖြစ်သည်..။ ထို့ကြောင့် သူမသာလျင် ပိုင်ဆိုင်ထိုက်သည်ဟု ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။
မလှရီက အခန်းတံခါးကို အသာဆွဲဖွင့်လိုက်သည်..။ အသံကြားသဖြင့် ဗြုန်းခနဲ ကြည့်လိုက်ရာ အခန်းထဲ ဝင်လာသော မလှရီကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ တဒင်္ဂအတွင်း ကျော်ထူး တစ်ယောက် ဖွတ်မေ့ ပုတတ်မေ့ မေ့သွားရသည်.။ မလှရီက အခန်းတံခါးကို ဂျက်ထိုးပိတ်လိုက်ပြီး ကျော်ထူးဆီသို့ တရွေ့ရွေ့ လျှောက်လာသည်..။
ကျော်ထူးကလည်း လီးတန်ကြီးကို လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ကြောင်ကြည့်နေသည်..။ ပြီးတော့ မှ ဗြုန်းခနဲ ပုဆိုးဖြင့် ဖုံးလိုက်သည်..။ မလှရီက ပလပ်စတစ်ခုံတစ်ခုံကို ဆွဲယူပြီး ကျော်ထူးနှင့် တစ်ပေခန့်အကွာတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လိုက်သည်..။
“ ဟို..ဟို….ဆေး….ဆေး လိမ်းနေတာပါ…မမ……”
“ ဆီး……..ဆီး အောင့်နေလို့ပါ……”
“ ဟွန်း….တဏှာရူးလေး….မသိရင်ခက်မယ်….ဟိုကောင်မ မနီကို လိုးဖို့ မဟုတ်လား…”
ကျော်ထူး မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးဖြင့် ဗျာ ခနဲ အာမေဋိတ်သံကြီး ထွက်သွားသည်..။
“ အခုမှ ဗျာ မနေနဲ့…၊ ဟေ့ကောင်…..နင်နဲ့ မိနီနဲ့ လိုးနေကြတာ…ငါ့မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် တွေ့ခဲ့ရတာ….သိရဲ့လား…..ဟင်း…..”
“ နေ့ လည်တုန်းကလေ…..မိနီအရက်ဆိုင် ထပ်ခိုးပေါ်မှာ..နင်တို့နှစ်ယောက် လိုးနေကြတာ…ဟောဒီ မျက်စိကြီးနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့တာ….သိပလား…”
မလှရီက သူမမျက်စိကို လက်ညှိုးနဲ့ နောက်ပြန်ထိုးပြရင်း ကြိမ်းသည်..။ ထို့နောက် စကားဆက်ပြန်သည်..။
“ ဒီကဖြင့် မလာ.မလာ နဲ့ စိတ်ပူနေလိုက်ရတာ…၊ မနေနိုင်တော့လို့ လိုက်ရှာတော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ…ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကို ပင်ပင်းတိုးတော့တာပဲ….အစ်ကိုတင် ဂြိုဟ်မွှေရုံ မကဘူး…၊ ညီကိုပါ …အလွတ်မပေးပဲ ဂြိုဟ်မွှေတဲ့ ကောင်မ….”
“ ဟို…….ဟို….အစ်ကိုကြီးနဲ့ မနီနဲ့က ဖြစ်နေကြတာလား….မမ…….”
“ အေး….ဒီကောင်မ နဲ့ ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိဘူး….၊ သူ့ညီမအရင်း ခင်သီတာကတော့ နင့်အစ်ကိုရဲ့ မယားငယ် ဖြစ်နေပြီ…။ ဒီည ပြန်မလာတာက အဲဒီ မယားငယ် မ ဆီ သွားအိပ်တာလေ…၊ တစ်ပတ်ကို ၃ ရက်လောက်က အဲဒီ မယားငယ်မ ဆီ သွားနေရတာလေ…..”
“ ဟုတ်ကော ….ဟုတ်ရဲ့လား….မမရာ….အစ်ကိုကြီးက လူးအေး လူမှန်ပါ……”
“ ဟား…ဟား…..ရီစရာကောင်းလိုက်တာ…လူအေး လူမှန်တဲ့…ဟာ ဟ….အဲဒီ မယားငယ်နဲ့…တော့အစ်ကိုကြီး နဲ့ ညားနေတာ…ကလေးတောင် မကြာခင် မွေးတော့မှာ…သိရဲ့လား……ဟွန်း…..”
“ ငါ…နင့်ကို လက်တွေ့ပြရမလားဟင်…ကျော်ထူး……”
မလှရီအသံထဲမှာ နာကျည်းဝမ်းနည်းသံတွေ အပြည့်ပါနေသည်..။ ထမီရင်လျားအတွင်းမှ မို့မောက် တင်းအယ် ဖောင်းကားနေသော နို့အုံကြီး နှစ်မွှာက ဒေါသကြောင့်လား ၊ရမ္မက်ကြောင့်လားမသိ..သိသာထင်ရှားစွာ နိမ့်ချီမြင့်ချီ လှုပ်နေသည်..။
“ မိန်းမ လိုးစရာ…ဒီလောက်တောင် ရှားရသလား…ဟယ်……ဒီကောင်မကိုမှ သွားလိုးရတယ်…လို့….နှာဗူးလေး…ရဲ့….”
“ အဲဒီ ကောင်မက …ငါ့ထက် အပြန်တစ်ရာ သာနေလို့လား..ဟင်…..ကျော်ထူး….”
မလှရီက ပြောပြောဆိုဆို ရင်လျားထားသော ထမီကို ဖြေချလိုက်သည်..။ ဝင်းဝင်းမွတ်မွတ် နုနုထွတ်ထွတ် တင်းရင်ပြည့်ဖြိုးလှသော နို့အုံလှလှကြီး နှစ်မွှာက ဘွားခနဲ ပေါ်လာသည်..။
လှလိုက်သည့် ရင်သားနှစ်မွှာ..။ ပြည့်တင်းဝင်းမွှတ်နေသည်..။ ဖြူဝင်းနေသော နို့အုံတဝိုက်တွင် သွေးကြောစိမ်းစိမ်းကြီးတွေက ယှက်ဖြာနေကြသည်..။ လုံးဝန်းမို့မောက်ပြီး အထက်သို့ ကော့ချွန်နေသည်..။ နို့စို့ကလေးငယ် ရှိသောကြောင့်သာ မနီနို့အုံကြီးက တင်းနေပုံရသည်..။
ကလေးငယ် မရှိသော မလှရီ နို့အုံကြီးက မနီ နို့ထက်ပင် ပြည့်တင်းဝင်းမှဲ့နေပါတော့သည်..။ ကျော်ထူးက မလှရီ၏ လှပပြည့်ဖြိုးသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ရမ္မက်မျက်လုံးတို့ဖြင့် စိမ်းစိမ်းကြီး ကြည့်ရင်း …ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်ကာ အာခေါင်တွေ ခြောက်လာသည်..။
“ ဒါက…နို့….ဟောဒီမယ်…စောက်ဖုတ် ကိုကြည့်အုံး….နင့်ဟာမထက် …သာပါတယ်…နော်….မအေလိုးလေး……..ရဲ့……”
မလှရီက ပလပ်စတစ် ခုံပေါ်ထိုင်နေရာမှ မတ်တတ် ထရပ်လိုက်ပြီး ထမီကို ကွင်းလုံး ချွတ်ချလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ပြန်ထိုင်လိုက်သည်..။ ပေါင်တံဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးတွေကို အနည်းငယ် ဖြဲကာ သူမပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ရှေ့သို့ ကော့ပြလိုက်သည်..။
ဆီးခုံ ဝင်းဝင်းကြီးအောက်ရှိ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမှာ အလွန်တင့်တယ်လှပနေသည်..။ စောက်မွှေးဟူ၍ တစ်ပင်မျှပင် မရှိပဲ…ရှင်းပြောင် ဝင်းစက်နေသည်..။ အငုတ်ပါ မရှိသည်မို့ စောက်မွှေးတွေက လုံးလုံးမပေါက်တာပဲလား ၊ နှုတ်ပစ်တာပဲလားတော့ မသိ…။ ကြည့်နေရင်း ကျော်ထူး သရေများပင် ထွက်ကျလာမတတ်…၊ ဂလုခနဲ တံတွေးမျိုချပစ်လိုက်ရသည်..။
ထူထဲသော နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်မွှာက သပြေညိုရောင် သမ်းနေသည်..။ ကျန်စောက်ဖုတ်အုံတပြင်လုံးမှာမူ ဆီသုတ်ထားသလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် ဝင်းဝါ အိစက် ပြောင်လက်နေပါသည်..။
“ ကဲ…..ဘယ့်နှယ်လဲ….နင့်ဟာမ စောက်ဖုတ်နဲ့ ငါ့စောက်ဖုတ်…ဘယ်ဟာက ပိုလှသလဲ…ပြောလေ….”
“ မမ…မမစောက်ဖုတ်က ပိုလှတယ်..ဗျ….အဟီး…..”
“ ဘာ…ဟီးဟီးလဲ….ဒါနဲ့များ မမေးမစမ်း…ဟိုဟာမကို သွားလို့ရတယ်…လို့….ပြောလိုက်ရရင်…မကောင်းပဲ ရှိတော့မယ်…“
“ ဘာကြောက်တာလဲ…..ဟိုဟာမကိုတော့ မကြောက်ဖူးလား….နင့်ကို ဖမ်းထားမှာ…သိရဲ့လား…….ကဲ…ကြိုက်ရဲ့လား…..မမ စောက်ဖုတ်ကို……..”
“ ဒါတောင် …နင်က ဒီစောက်ဖုတ်ကို မလိုးပဲ…ဟိုဟာမ စောက်ဖုတ်ကို ဘာကြောင့် စည်းကျော်ပြီး လိုးရတာလဲ…ဟင်….”
“ ဟို…ဟို…အစ်ကို့ မိန်းမမို့…ကြောက်လို့…မမရဲ့…“
“ နင့်အစ်ကိုက ငါ့ကိုပစ်ပြီး…မယားငယ် ယူထားတာလေ…အဲဒါ ..တရားသလား…..”
“ နင်ကရော…အခု…ငါ့ကို မချစ်နိုင်ဘူးလား……”
“ ချစ်ရင် မကြောက်နဲ့….ကြောက်ရင်..မချစ်နဲ့…သေနာလေးရဲ့……”
ကျော်ထူးကို ..ကိုသန့်စင် ညီမဟုတ်လားဟု မနီက မေးပုံနှင့် သူ့အရက်ပုလင်းထဲက အရက်များ ဖင်ကပ်မျှသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပုံကို အခုမှ ကျော်ထူး သဘောပေါက်သွားလေသည်..။
သူ့အစ်ကိုမိန်းမ မလှရီကိုလည်း အရမ်းသနားသွားသည်..။ မလှရီ၏ အချစ်ကွက်လပ်ကို တာဝန်ကျေအောင် ဖြည့်ဆီးပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါသည်..။
ခုတင်ပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး မလှရီ လက်မောင်းအိအိကြီးများကို ပွေ့ကိုင်လိုက်ပြီး ဆွဲယူလိုက်သည်..။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွားသောအခါ သူ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်..။ မလှရီက လက်နှစ်ဖက်ဆန့်တန်းပြီး ကျော်ထူးလည်ပင်းကို တင်းတင်း သိုင်းဖက်လိုက်သည်..။ ကျော်ထူးလက်နှစ်ဖက်ကလည်း မလှရီ၏ ခါးလေးကို သိုင်းဖက်ဆွဲညှစ်လိုက်သည်..။
နှစ်ယောက်သား နှုတ်ခမ်းချင်း ထိကပ်သွားသည်..။ မွတ်သိပ်ပြင်းပြစွာ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ကြသည်..။ နှုတ်ခမ်းစုပ်နေရင်းကပင် ကျော်ထူးလက်တွေက မလှရီ၏ ပြည့်ဖြိုးထွားကားလှသော ဖင်သားဆိုင်တင်းတင်းအိအိကြီးကို အထပ်ထပ်အခါခါ ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပေးနေသည်.။ ပူနွေးမာကျောသော လီးတန်ကြီးက ဖောင်းတင်းဝင်းအိနေသော ဆီးခုံမို့မို့ကြီးကို ဖိထောက်ထားသည်..။
နှစ်ယောက်စလုံး ရမ္မက်သွေးတွေ ဆူပွက်ထလာနေသည်..။ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာသည်..။ အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းထန်လာသည်..။ မလှရီလက်တွေက ကျော်ထူး လီးတန်နွေးနွေးကြီးကို ဆုပ်ညှစ်ပွတ်ဆွပေးနေသလို ကျော်ထူးလက်တွေကလည်း မလှရီ ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းအိအိကြီးကို ဖိပွတ်ကုတ်ဆွပေးနေသည်..။ ထို့နောက် စောက်ခေါင်းအတွင်း လက်ညှိုးကို ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ဝေ့ကာဝိုက်ကာ မွှေဆွသွင်းနှုတ်ပေးနေပြန်သည်..။
စောက်ရေတွေက စိုရွှဲအိုင်ထွန်းနေပြီမို့ မွှေဆွသွင်းနှုတ် လုပ်ပေးတိုင်း တပြွတ်ပြွတ်..အသံတွေက ထွက်ပေါ်နေသည်..။ ဟင်း………. မလှရီ သက်ပြင်းရှည်ကြီး တစ်ချက်ချလိုက်ရင်း…..
ကျော်ထူးက မလှရီကိုယ်ကို ညင်သာစွာ တစ်ပတ်လှည့်လိုက်ပြီး ခုတင်စောင်းပေါ် ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်..။ ပြီး ခုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲသိပ်ပေးလိုက်သည်..။
ဖြူဖွေးတုတ်ခိုင်သော ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်းက အောက်သို့ တွဲလောင်းကျနေပြီး ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမှာ အထက်သို့ ပြူးပြူးကြီး ကန်ထွက်လာသည်..။ ကျော်ထူးက ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အနည်းငယ် ဖြဲပေးလိုက်ရာ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမှာ အနည်းငယ် ပြဲဟ လာသည်..။ နုထွေးနီမြန်းသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြစ်ကာ စောက်ရေကြည်တို့ဖြင့် ဝင်းလက်နေသည်..။
ကျော်ထူးက ပြဲဟနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ သူ့ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီးကို ဖိနှစ်သွင်းထည့်လိုက်သည်…။ နွေးထွေးအီဆိမ့်သော ကာမအရသာကို ထိထိမိမိ ခံစားလိုက်ရသည်..။ တဖြည်းဖြည်းချင်း လီးတန်ကြီးက စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲသို့ တစ်ရစ်ချင်း တိုးဝင်လာသည်..။ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကျောတုတ်ခိုင်သော လီးတန်ကြီးက ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း တိုးဝင်လာသည်ကို မလှရီတစ်ယောက် မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ အံကိုကြိတ်ပြီး အားရကျေနပ်စွာ ခံယူနေပါသည်..။
နာကျင်သလောက် ကောင်း ၊ ကောင်းသလောက် ရမ္မက်ဇောတွေကြွနေသော ကာမရသ သဘောမှာ ရှုပ်ထွေးနက်ရှိုင်းလွန်းလှသည်..။ လီးတန်ကြီးကို ဖုံးအုပ်ထားသော အရေပြား အရစ်အရစ်တွေက မလှရီ၏ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုတွေကို ပွတ်တိုက်တိုးဝင်လာခြင်းဖြစ်ရာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောတွေမှာ တဖြင်းဖြင်း လှုပ်ခတ်တုန်ခါသွားသည်..။
လီးတန်ကြီးက ကြီးမားတုတ်ခိုင်လွန်းသဖြင့် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်လွှာမှာ အတွင်းသို့ ချိုင့်ဝင်နေပြီး ကျန်စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး တင်းရင်း ဖောင်းကားနေသည်..။
ကျော်ထူးက အဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားသော လီးတန်ကြီးကို တဖြည်းဖြည်း ပြန်နှုတ်သည်..။
ဒစ်ဆံပြဲပြဲကြီး ပေါ်လုပေါ်ခင်ရောက်မှ ရပ်လိုက်သည်..။ စောက်ရေတို့ဖြင့် သုတ်လူးထားသဖြင့် လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးမှာ အရောင်တလက်လက် ထွက်နေပါတော့သည်..။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် အုံကြီးတစ်ခုလုံးမှာလည်း လီးတန်ကြီးနှင့် အတူ ကြွတက်လာသည်..။ ဤကဲ့သို့ အသွင်းအနှုတ် လေးငါးခါလောက်ပြုလုပ်ပြီးသောအခါ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဝင်းဝါတင်းမို့နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုတ်ချေပွတ်ဆွနေပြန်သည်..။
စောက်ဖုတ်ထဲ လီးတန်မြှုပ်ပြီး နို့အုံကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုတ်ချေခံရသောအခါ စောက်ဖုတ်အုံကြီး တစ်ခုလုံး တင်းမာခုံးထလာသည်..။ လှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ ယားကြွလာသည်..။
“ ရှီး…..အီး….ကျွတ်ကျွတ်….ကောင်းလိုက်တာ….မောင်လေးရယ်…မမတစ်သက် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အရသာမျိုး တစ်ခါမှ မခံစားခဲ့ရပါဘူးကွယ်….၊ မမကို ပစ်မထားပါနဲ့နော်….မင်းအစ်ကိုက ရက်စက်သလောက် မင်းက မမကို သနားကြင်နာပါနော်…မောင်လေး…နော်……”
“ စိတ်ချပါ…မမရာ…၊ ကျနော်လဲ မမကို ကြိတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေတာကြာပါပြီ…..ဒါပေမယ့် အစ်ကို့ မယားဆိုတော့ အရာရာ ငဲ့ကွက်ပြီး မြိုသိပ်နေရတာပါ……”
ကျော်ထူးက သူ့စကားဆုံးသည်နှင့် လီးအသွင်းအနှုတ်ကို ခပ်သွက်သွက်လေး ပြုလုပ်ပါတော့သည်..။
“ အမေ့…….အီး….ရှီး…..ကျွတ် ကျွတ်………အား …..အင့်…..အင့်….အမေ့……..အား……….ရှီး…အမလေး……ကောင်းလိုက်တာကွယ်……မောင်လေးရယ်…….အ……..အင့်….အီး……အမေ့…….”
ဆောင့်ချက်တွေက တဖြည်းဖြည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်သွက်သွက် အသွင်ဆောင်လာသည်..။ စံချိန်မှီ ဆေးဆီအစွမ်းနှင့် စောက်ဖုတ်အငွေ့ဓါတ်၏ အစွမ်းကြောင့် လီးတန်ကြီး၏ တုတ်ခိုင်မာကျောမှုမှာ အံ့မခန်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာသည်..။
မလှရီတစ်ယောက် လည်ပင်းကြောကြီးတွေ ထောင်ကာ ညီးညူစုပ်သပ်လျက် ရှိသည်..။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း လူးကာ လှုပ်ရမ်းနေသည်..။
“ ဘာ….ဘာလဲ ..ဟင်….”
“ ဟင့်အင်း….ကောင်း………ကောင်းလွန်းလို့……..အမေ့…ကျွတ်………အင့်……..အင့်.. ..အား…..အီး…အမေ့…”
မလှရီက သူမဖင်ဆုံကြီးကို ကြွကြွပြီး ကော့ကော့ခံပေးချင်သော်လည်း ပေါင်နှစ်ချောင်းမှာ တွဲလောင်းကြီး ချထားရသဖြင့် စိတ်ကြိုက် လှုပ်ရှားခွင့် မသာပဲ ဖြစ်နေသည်..။ ကျော်ထူးက ဒလစပ်ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေတာကို ပင် တွန့်လိမ် ကော့ပျံရင်း ခံစားနေရသည်..။ သူ့ကိုယ်နှိုက်ကလည်း စိတ်ရှိလက်ရှိ ကော့ကော့ပေးပြီး ခံပစ်လိုက်ချင်သည်…။ စကောဝိုင်း၍ ညှစ်ညှစ် ခံလိုက်ချင်သည်..။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုမှ မအောင့်နိုင်တော့သည့်အဆုံး…..
တိုးညှင်းသော အသံလေးဖြင့် ခေါ်လိုက်သည်..။ ကျော်ထူးက မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆောင့်လိုးနေရာမှ….
“ ဟို….မမ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ခုတင်ပေါ် တင်ပေးကွာ….မမဘက်က အားရပါးရ လှုပ်ရှားလို့ မရဘူး….ဖြစ်နေတယ်….မမကလဲ မောင်လေးကို အောက်က ကော့ပေးချင်လို့….”
“ အော်…….အင်း အင်း….တင်လေ…..”
ကျော်ထူးက နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အခြေမှ ဆုပ်ကိုင်ထားသော သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို လွှတ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကိုကုန်း၍ တွဲလောင်းကျနေသော ခြေနှစ်ချောင်းကို ဒူးကောက်ကွေးဆီမှ ဆွဲမလိုက်ကာ ခုတင်ပေါ်တင်ပြီး ဆွဲထောင်လိုက်သည်..။ ထိုအခိုက်မှာ သူ့လီးတန်ကြီးမှာ ပလွတ်ခနဲ ကျွတ်ထွက်သွားသည်..။ ဖင်ဆုံကြီးကို ခုတင်စောင်းတွင် အံကျတင်ထားပြီး ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီး နှစ်ချောင်းကို ရင်ဘတ်ဆီအထိ တွန်းကပ်ဖိချလိုက်သည်..။ ထိုအခါ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အစွမ်းကုန် ပြူးအာထွက်လာတော့သည်.။ ကြီးမားသော လီးတန်ကြီး၏ အသွင်းအနှုတ်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးနှစ်လွှာမှာ ဘေးသို့ အနည်းငယ် လန်ထွက်နေသည်..။ စောက်မွှေးတစ်ပင်မှ မရှိသဖြင့် ပြဲအာဖောင်းအစ်လျက် ရှိနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ကျော်ထူး ရမ္မက်ဇောကို ထန်သထက် ထန် ၊ ကန်သထက်ကန် လာစေသည်..။ ဝက်မစောက်ဖုတ်နံ့ကို ရထားသော ဝက်သိုးကြီးကဲ့သို့ တရှူးရှူး တရှဲရှဲ ဂဏာမငြိမ် ဖြစ်နေပါတော့သည်..။ ထို့ကြောင့် ကော့ထောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို လက်နှင့် ဖိနှိပ်၍ စောက်ဖုတ်အဝထဲသို့ တရှိန်ထိုး ဖိသွင်းဆောင့်ချလိုက်သည်..။
ဤမျှ ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးတန်ကြီးဖြင့် နွားသိုးကြိုးပြတ် တရှိန်ထိုး ဆောင့်သွင်းလိုက်သောအခါ မလှရီတစ်ယောက် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါ အီဆောင့် သွားရသည်..။ ရမ္မက်ဇောတွေ အကြီးအကျယ် ထကြွနေသော အချိန်အခိုက်မို့သာ ခံနိုင်ရည်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်..။ သာမန်အချိန်ဆို ဤပုံစံမျိုးဖြင့်သာ ဆောင့်လိုးလိုက်ပါက မေ့မျောသွားနိုင်လောက်သည်..။ မလှရီ၏ နို့အုံကြီးမှာ စောစောကထက် ပို၍ ဖောင်းတင်းလာပြီး နို့သီးခေါင်းနှင့် ၄င်းတဝိုက်ရှိ အညိုဝိုင်းလေးမှာ စူဖောင်းတင်းပြောင်နေသည်..။ စောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း အကြီးအကျယ် လှိုက်လှိုက်ထကာ ယားလွန်းလှသည်..။ ကျော်ထူးက အဆုံးထိ မြုပ်ဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကို တဝက်ကျော်ကျော် ပြန်ထုတ်ပြီး အဆုံးထိ မသွင်းပဲ ခပ်သွက်သွက်လေး အသွင်းအနှုတ် လုပ်ပေးလိုက်သည်..။
မလှရီက ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကို ကော့ကော့ပေးရင်း ညှစ်ညှစ်ခံသည်..။ နှစ်ယောက်စလုံး ကာမအရသာထူးကြီးကို ခေါင်ခိုက်သည်အထိ အပြည့်အဝ ခံစားနေရသည်..။ကျော်ထူး အခုမှ သတိထားမိသည်..။ မလှရီ စောက်ဖုတ်က မနီစောက်ဖုတ်ထက် အတွင်းသား ပိုထူသည်..။ ထို့ကြောင့် လိုးရသည်မှာ ပိုပြီး စီးစီးပိုင်ပိုင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ရှိသည်..။ ပြီးတော့ အတွင်းညှစ်အားကလည်း သန်မာလွန်းလှသည်..။ အပင့်အကော့ အဝေ့အဝိုက် တွေကလည်း စုံသည်..။ စောက်ဖုတ်အတွေ့က ထူးခြားလှသဖြင့် ကျော်ထူးတစ်ယောက် မူးမေ့မတတ်ပင် ဖြစ်လို့နေသည်..။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေက ညှစ်အားကောင်းလွန်းလှသဖြင့် ကျော်ထူးလီးတန်ကြီးမှာ ကျဉ်ဆိမ့်အီကောင်းကြီး ဖြစ်နေသည်..။ ဤမျှ လိုးလို့ကောင်းလှသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပစ်၍ စောက်ဖုတ်အသစ်ရှာသော သူ့အစ်ကို ကို အံ့သြမိသည်..။
မလှရီက အောက်မှ ပင့်ပင့် ပြီး ကော့ခံနေရင်း တိုးညှင်းသော လေသံဖြင့် ထူးသည်..။
“ ကိုကို့….လီးက ကျနော့်ထက် ကြီးလား…….”
“ ဟင့်အင်း……….မင့်တဝက်တောင် မရှိဘူး…..အင့်….အမေ့…..အ….”
ကျော်ထူးက အားရပါးရ ပစ်ဆောင့်လိုက်ရာ စကားအဆုံး အင့်ခနဲ ဖြစ်သွားရှာသည်..။
“ ဖွတ်…ပြွတ်…..ဗြစ်……..ပလွတ်…….အမလေး….အမေ့…….အင့်…..အား…အီး…ရှီး. ..အ……….အား…….ကျွတ်.ကျွတ်…..အင့်…….”
မလှရီတစ်ယောက် သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ရင်း ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုန်လှုပ်ကာ စောက်ရေပူတွေ ပန်းထွက်ကုန်သည်..။
မလှရီတစ်ယောက် ကွေးကောက်တွန့်လိမ်ကာ ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း ကျော်ထူးက မပြီးသေး…။ အရှိန်နှင့် ဆောင့်ကောင်းနေဆဲ…။ စောက်ရေထွက်နေစဉ် အဆက်မပြတ် ဆောင့်အလိုးခံရသည်မှာ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သောကာမအရသာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်..။ ထိုစွမ်းဆောင်ရည်က မိန်းမတွေကို အသည်းအသန် စွဲလန်းစေသည်..။ ထိုလီးမျိုးကို တစ်သက်မမေ့နိုင် ဖြစ်သွားကြတတ်သည်..။ အချက် ရှစ်ဆယ်ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်း မနားတမ်း ဆောင့်ပြီးသော အခါ ကျော်ထူးလချောင်းကြီးထဲမှာ ကျင်ခနဲကျင်ခနဲ စိမ့်တက်လာသည်..။ လချောင်းကြီးတစ်ခုလုံး ပူရှိန်းယားကြွ သွားပြီး အရှိန်နှင့် ဆောင့်တွန်းခံလိုက်ရသလို တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားပြီး သုတ်ရေပူတွေ ဒလဟော ပန်းထွက်ကုန်ပါတော့သည်..။ ကျော်ထူးခန္ဓာကိုယ်က မလှရီ ကိုယ်လုံးကြီးပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားသည်..။ မလှရီက ကျော်ထူးကျောပြင်ကြီးကို နှစ်သက်ကျေနပ်စွာ သိုင်းဖက်ထားရင်း ကာမရေစီးကြောင်းတွင် ဆက်လက် မျောပါသွားသည်..။ လီးရော စောက်ဖုတ်ပါ ဒိတ်ခနဲ ဒိတ်ခနဲ လှုပ်နေသည်..။
“ ဒီနေ့ …မမ နှစ်လုံး တစ်သောင်းခွဲဖိုး ပေါက်တယ်……..”
“ တကယ်…ပေါ့ လို့…….”
“ ဘယ်က ဂဏန်း ရတာလဲ…ဟင် မမ…”
ကျော်ထူးက တကယ့်ကို အားရဝမ်းသာစွာဖြင့် မေးလိုက်သည်..။
“ စောက်ဖုတ်ကို လှန်ထိုးရင် ဘယ်လို အသံထွက်လဲ….ဟင်…မောင်လေး……”
“ ဖွတ်…စွပ် လို့ထွက်တာပေါ့…မမရ..”
“ အေး….မမလဲ…အဲဒီ ဖွတ် စွပ် ကိုထိုးတာ….အဲဒီ ဂဏန်း ထိုးချင်လွန်းလို့ ကောင်လေး တစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မတကောင် လိုးနေတာကိုတောင် ပြီးအောင် မကြည့်နိုင်ဘူးလေ…..အဟင်း…ဟင်း…..”
“ ကြည့်စရာ မလိုပါဘူး….မမရာ…အဲဒီကောင်လေးကို မမပိုင်သွားပါပြီ…….”
မလှရီက ကျော်ထူးပါးကို ရှူးခနဲ ရှူးခနဲ နမ်းပစ်လိုက်ပါတော့သည်..။ အားရအောင် နမ်းပြီးသောအခါ …..
“ ကဲ ကဲ…မောင်လေး…ခဏဖယ်အုံး…မမတို့ ငွေသွားထုတ်ရအောင်…. မင်းပါလိုက်ခဲ့….တစ်လက်စထဲ လက်ခွဲဒိုင် ခင်မာရီဆီက ဆိုင်ကယ်ငှားပြီး မင်းအစ်ကို မယားငယ်အိမ်မှာဆိုတာ…မမ လက်တွေ့ပြမယ်…ကဲ ထ…”
ကျော်ထူးက ဆိုင်ကယ်မောင်းတတ်သော်လည်း လမ်းမသိ၍ မလှရီကိုယ်တိုင် မောင်းသည်..။ ကျော်ထူး နောက်က ခွထိုင်လျက် မလှရီ ဖင်ကြားကို သူ့လီးဖြင့် ထောက်ကာ နို့နှစ်လုံးကို ထိထိမိမိ ဆုပ်ကိုင်သိုင်းဖက်ရင်း ပါလာသည်..။ အသိအိမ်တစ်အိမ်တွင် ဆိုင်ကယ်ဝင်ထားပြီး လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြသည်..။ ဆိုင်ကယ်ထားခဲ့သော အိမ်နှင့် တစ်ပြလောက်အရောက်တွင် လမ်းအရှေ့ဖက်က အိမ်တစ်အိမ်ကို မေးဆတ်ပြသည်..။
“ အဲဒီ အိမ်ပဲ….မောင်လေး……”
ကျော်ထူးက အသာ ဝင်းထရံကို ကျော်၍ အတွင်းသို့ အကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်..။ သေချာသွားပြီ..။ သူ့အစ်ကိုနှင့် မယားငယ်တို့ နှစ်ယောက်ထိုင် ဆက်တီခုံပေါ်တွင် ပူးကပ်ထိုင်ရင်း တီဗီ ကြည့်နေကြသည်..။ ခပ်လှမ်းလှမ်းက စောင့်နေသော မလှရီထံ ပြန်လာသည်..။ အနားသို့ ရောက်သောအခါ ဘာမပြော ညာမပြောနှင့် ကြုံးဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်..။ တော်ပါသေးသည်..။ ထိုနေရာတဝိုက်မှာ လမ်းမီးကျွမ်းနေပုံရသည်..။ မလှရီက သူ့ဗိုက်တွင်းကြောကို ခပ်နာနာလေး ဆွဲလိမ်လိုက်ပြီး….
မလှရီ ရင်ထဲ ကြည်နူးချမ်းမြေ့သွားသည်..။
“ ည…အားရပါးရ ချစ်အုံးမှာနော်……”
နှုတ်က မချစ်ဖူးဆိုသော်လည်း မလှရီ လက်က ကျော်ထူးလီးတန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်ပစ်လိုက်ပါတော့သည်..။……